पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य | Word of Truth, Nepal
आत्माले कसरी भरिने
February 5, 2020 /in पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य /by Pradesh Shrestha
पाठ १० — आत्माले कसरी भरिने
विश्वासीहरूलाई आफ्नो पुत्रको स्वरूपमा बदली गर्नु परमेश्वरको सुन्दर उद्देश्य हो (रोमी ८:२८-२९; २ कोरिन्थी ३:१८)। परमेश्वर विश्वासीमा आत्माको फल फलाएर आफ्नो पुत्रको चरित्र विकास गर्न चाहनुहुन्छ (गलाती ५:२२-२३)। यसो हुनबाट रोक्ने कुरा के हो? यदि परमेश्वरका आत्मा हामीभित्र हुनुहुन्छ भने, र यदि विश्वासीजन फलवान भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भने, किन कहिलेकाहीँ विश्वासी जन शारीरिक र फलहीन हुन्छ?
यदि आत्माको फल प्रेम हो भने, कुनै कुनै बेला हामी किन प्रेम नगर्ने र स्वार्थी हुन्छौं? किन हामीमा त्यो आनन्द हुँदैन जुन आनन्द हामीमा होस् भनी प्रभु चाहनुहुन्छ? अरूहरूसँग सहनशील हुनुको सट्टा, किन म झोंकले रन्किहाल्छु? किन विश्वासीहरूमा प्राय: जसो आत्मसंयम हुँदैन? हाम्रो जीवन प्राय: परमेश्वरको अधिनतामा हुँदैन, यस्तो किन हुन्छ?
गलाती २:२० मा पढ्छौं, “ख्रीष्ट म_______ जिउनुहुन्छ।” ख्रीष्ट मभित्र हुनुहुन्छ र उहाँ आफ्नो जीवन मभित्र जिउन चाहनुहुन्छ; तर किन प्रभु येशू मभित्र आफ्नो जीवन जिइरहनु भएको छैन जस्तै देखा पर्ने समयहरू आउँछन्? प्रभु येशूले साँच्चै हामीमा र हामीद्वारा आफ्नो जीवन देखाउन चाहनुहुन्छ। समस्या यही हो कि अकसर हामी नै अवरोध बन्न पुग्छौं। अकसर हामीले प्रभुलाई हामीभित्र उहाँको काम गर्न दिँदैनौं। परमेश्वरको आनन्द विश्वासीमा आत्माको फल फलाउनुमा नै छ, तर केही निश्चित परस्थितिहरू मिल्यो भने मात्र परमेश्वरले सो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी कसरी आत्माले भरिन सक्छौं? ख्रीष्टिय जीवन हाम्रो पकडभन्दा पनि बाहिरको कुनै जटिल प्रकृया होइन। आत्मिक वा आत्माले भरिएको मानिस हुनको निम्ति थाह पाउनैपर्ने कुनै गाह्रो वा गोप्य सिद्धान्त छैन। आत्माले भरिएको हुनका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई एकदम सरल आज्ञाहरू दिनुहुन्छ। यस पाठमा ती आज्ञाहरूको अध्ययन गरिनेछ।
चाबी आज्ञा (एफेसी ५:१८)
परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने ख्रीष्टिय जीवन जिउन असम्भव छ। हामी जती कडा प्रयास गर्छौं, त्यती नै विफल हुन्छौं। “जे असल छ, त्यसलाई पूरा गर्नेचाहिँ म ______________” (रोमी ७:१८)। हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन खोजे तापनि, त्यसो गर्ने शक्ति वा क्षमता हामीमा छैन। तरैपनि खुशीको खबर यो हो, कि परमेश्वरले असम्भवलाई सम्भव तुल्याउन सक्नुहुन्छ! “किनभने _________________ निम्ति कुनै कुरा पनि _______________ हुनेछैन” (लूका १:३७)।
एफेसी ५:१७ लाई विचार गर्नुहोस्। के परमेश्वरले विश्वासीहरू बुद्धिहीन भएको चाहनुहुन्छ? ________________। प्रभुको __________ के रहेछ सो हामीहरूले ___________ भएको उहाँ चाहनुहुन्छ! परमेश्वरको इच्छा १८ पदमा पाइन्छ। हरेक विश्वासीको निम्ति परमेश्वरको इच्छा यही हो।
“अनि दाखमद्यले ____________, जसमा चरित्रहीनता हुन्छ; तर आत्माले ______________ होओ” (एफेसी ५:१८)। यस पदलाई हामीले यसरी पनि भावानुवाद गर्न सक्छौं, “मद्यको प्रभावमा नरहो, तर तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुने परमेश्वरको आशिषमय प्रभाव र अधिनतामा रहो।” मातेको मानिस मद्यको नियन्त्रणमुनि रहन्छ; विश्वासी जनचाहिँ परमेश्वरका आत्माको अधिनता र प्रभावमुनि रहनुपर्छ। मातेको मानिसले मद्यलाई होइन तर मद्यले चाहिँ मातेकोलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ।
“भरिनु” शब्दका दुई उदाहरणहरूलाई हेरौं। लूका ५:२६ मा यी मानिसहरू “__________ले भरिए।” यसको अर्थ हो उनीहरू डरद्वारा नियन्त्रित थिए। यस भावनाले उनीहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेको थियो र उनीहरूलाई भिन्नै शैलीमा व्यवहार गर्ने तुल्याइरहेको थियो। लूका ६:११ ले भन्दछ, “उनीहरू ___________ले बौलाए (वा भरिए: अङ्ग्रेजी के.जे.भी. मा “filled”)।” प्रभुका शत्रुहरू रिसको यस भावनाद्वारा नियन्त्रित थिए र यसले उनीहरूलाई भिन्नै तरिकाले व्यवहार गर्ने तुल्याइरहेको थियो। येशूबाट छुटकारा पाउन उनीहरू कुनै पनि हदसम्म जान तम-तयार थिए। यूहन्ना १६:६ लाई पनि तुलना गर्नुहोस्। उनीहरूको हृदय ____________ भरिएको थियो। उनीहरू शोकद्वारा नियन्त्रित र दमन गरिएका थिए।
त्यसैले “भरिनु” शब्दले अकसर कुनै कुराद्वारा नियन्त्रित गरिनु, वा कुनै कुराको प्रभावमुनि रहनु भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ।
मद्यले मातिएको मानिसले असामान्य व्यवहार गर्दछ। उसले आफ्नो सामान्य शैली अनुसार व्यवहार गर्दैन, तर उसको व्यक्तित्व नकारात्मक तरिकाले परिवर्तन भएको हुन्छ। मातिएकाहरू अर्कै किसिमले व्यवहार गर्छन्, र कहिल्यै पनि उनीहरूले आफ्नो सामान्य अवस्थामाझैं व्यवहार गर्दैनन्। त्यस्तै गरी, आत्माले भरिएको मानिसले पनि असामान्य व्यवहार गर्दछ। उसले आफ्नो सामान्य शैलीमा व्यवहार गर्दैन। उसले एउटा नयाँ सृष्टिलेझैं व्यवहार गर्छ। ऊ ख्रीष्टमा एउटा “न______ सृ_______” हो (२ कोरिन्थी ५:१७)।
एफेसी ५:१८ को “भरपूर होओ” कृयापद कर्मवाच्यमा छ। यसको अर्थ हो हामीले आफैंलाई भर्दैनौं, तर हामीलाई भर्नको निम्ति हामीले आत्मालाई सम्पिनुपर्छ। उहाँले नै भर्ने काम गर्नुहुन्छ र हामीले आफैंलाई भर्नको निम्ति उहाँलाई सुम्पिनपर्छ। उहाँले हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ र हामी उहाँको आशिषमय प्रभावमुनि रहेनु नै उहाँको इच्छा हो।
एफेसी ५:१८ को “भरपूर होओ” भन्ने कृयापद हरेक विश्वासीले पालन गर्नैपर्ने आज्ञा हो। यस आज्ञालाई पालन गर्न चुक्नु चाहिँ पाप हो। जसरी जसरी मत्त हुनु भनेको अनाज्ञाकारिता हो ठीक त्यसरी नै आत्माले भरपूर नहुनु पनि अनाज्ञाकारिता हो। यदि कुनै मानिस मत्त हुन्छ भने, उसले १८ पदको पहिलो भागलाई पालन गरिरहेको हुँदैन; यदि ऊ आत्माले भरपूर हुनबाट विफल हुन्छ भने, उसले १८ पदको दोस्रो भागलाई पालन गरिरहेको हुँदैन। आत्माले भरपूर हुनु भनेको ऐच्छिक कुरा होइन; यो अत्यावश्यक कुरा हो र यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा यी कुराहरू पर्छन्, परमेश्वरसित हामी ठीक सम्बन्धमा हुनु र हामीले आफ्नो जीवनमा उहाँको कामलाई बाधा नदिनु।
आत्माले भरिनु हरेक विश्वासीको निम्ति परमेश्वरको इच्छा हो। आफ्नो सन्तानको निम्ति यो उहाँको इच्छा हो (एफेसी ५:१७ सित तुलना गर्नुहोस्—“प्रभुको ___________ के रहेछ, सो बुझ्ने होओ”)।
तपाईंसँग आत्माको कति भाग छ? के तपाईंसँग आत्माको ५% छ? के तपाईंसँग आत्माको ८०% छ? यदि तपाईं ख्रीष्टमा एउटा विश्वासी हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग आत्मा पूरापूर हुनुहुन्छ! उहाँ तपाईं भित्र भरपूर हुनुहुन्छ र पूर्ण रूपले वास गर्नुहुन्छ (२ तिमोथी १:१४)। उहाँ तपाईंमा अर्ध रूपमा वास गर्नुहुन्न; उहाँ तपाईंमा पूर्ण रूपले वास गर्नुहुन्छ। त्यसैले वास्तविक प्रश्न यो होइन, “तपाईंमा आत्माको कति भाग हुनुहुन्छ?” तर यो हो, “आत्माले तपाईंको कति भाग पाउनुभएको छ?” के तपाईंले आफैंलाई पूर्ण रूपमा परमेश्वरको निम्ति दिनुभएको छ? कि केवल अर्ध रूपमा मात्र दिनुभएको छ?
पवित्र आत्माले भरिन एउटा व्यक्तिले पूरा गर्नैपर्ने तीनओटा आज्ञाहरू छन्, र यी तीन आज्ञाहरू नयाँ नियमका तीन खण्डहरूमा पाइन्छन्, र हरेक आज्ञा पवित्र आत्मासँग सम्बन्धित छ:
१) पवित्र आत्मालाई शोकित नपार (एफेसी ४:३०)।
“अनि परमेश्वरका ___________ आत्मालाई _____________ नपार, जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराको दिनका निम्ति छाप मारिएका छौ” (एफेसी ४:३०)।
यस पदमा दुईओटा चाबी शब्दहरू छन्। पहिलो, त्यहाँ “पवित्र” भनिने शब्द छ। हामी भित्र वास गर्नुहुने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनी हामीले कहिल्यै पनि नबिर्सेका हौं। पवित्र परमेश्वर हामी भित्र वास गर्नुहुन्छ, र उहाँ हरेक पापपूर्ण र अशुद्ध कुराहरूबाट पूर्णरूपमा अलग हुनुहुन्छ। अनि याद राख्नुहोस्, हामी भित्र हुनुहुने पवित्र परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ! जसरी चिकित्सकले फोहोर, दुषित र किटाणुयुक्त पन्जाको प्रयोग गर्दैन, त्यसरी नै पवित्र आत्माले पनि पापद्वारा दुषित भएको मानिसलाई भर्नुहुँदैन।
यस पदको दोस्रो चाबी शब्द हो, “शोकित”। यो शब्दले प्रेम र घृणा दुवैलाई सङ्केत गर्दछ। यसको निम्ति एउटा उदाहरण: एकजना प्रहरी आफ्नो विभागको लागुऔषध शाखामा काम गर्छ। उसले यस अनैतिक लागुऔषधिद्वारा असङ्ख्या मानिसहरू माझ भएको विशाल क्षतिहरूलाई देखेको छ र उक्त लागुऔषधिले धेरै जनाको जीवनलाई तहस-नहस पारेको कुरालाई ऊ घृणा गर्दछ। त्यसैले, उसले जवानहरूलाई यी खतराहरूको बारेमा शिक्षा दिन र उनीहरूलाई यो खतरापूर्ण बाटोमा जानबाट रोक्न आफैंलाई समर्पण गर्दछ। त्यसपछि एकदिन उसले आफ्नै छोरा लागुऔषधमा डुबेको थाह पाउँछ। त्यसप्रतिको शोकचाहिँ उसको प्रतिकृया हो। उसले लागुऔषधिलाई घृणा गर्दछ, तर उसको आफ्नै प्रिय छोरा त्यस्ता कुराहरूमा संलग्न रहेकोमा ऊ शोकित भएको छ। जब तपाईंले प्रेम गर्नुभएको व्यक्तिले तपाईंले घृणा गर्नुहुने काम गर्दछ, तपाईं शोकित (पीडित, दु:खित) बन्नुहुन्छ।
पवित्र आत्मालाई पनि यस्तै हुन्छ। उहाँले विश्वासीलाई अति प्रेम गर्नुहुन्छ, तर जब एउटा विश्वासीले उहाँले घृणा गर्नुहुने काम (उहाँको पवित्रताको कारणले) गर्दछ, उहाँ शोकित बन्नुहुन्छ। पापले पवित्र आत्मालाई शोकित तुल्याउँछ र अशुद्ध भाँडालाई भर्न उहाँ इन्कार गर्नुहुन्छ। यूहन्ना १३:८ हेर्नुहोस् (“भाग” शब्दको मतलब हो “साझेदारी” वा “सङ्गति”)। दुषित खुट्टा भएको चेलासँग कुनै पनि कार्य गर्न ख्रीष्टले इन्कार गर्नुहुन्छ। थप अध्ययनको निम्ति यूहन्ना १३ को टिप्पणी अध्ययन गर्नुहोस्।
एफेसी ४ अध्यायको सन्दर्भ अनुसार, पवित्र आत्मालाई शोकित तुल्याउने पापहरू के-के हुन्?
३२ पद—क्षमाशील नभएको हृदय।
१ यूहन्ना १:५ पढ्नुहोस्, “अनि जुन समाचार हामीले उहाँबाट सुनेका छौं, र तिमीहरूलाई सुनाउँछौं, त्यो यही हो – _______________ ______________ हुनुहुन्छ, र उहाँमा ________________ छँदै छैन।”
परमेश्वर विशुद्ध ज्योति (शुद्धता, पवित्रता) हुनुहुन्छ। पापले दुषित विश्वासीलाई भर्न परमेश्वर इन्कार गर्नुहुन्छ। तपाईंको दाँत माझ्ने ब्रश फोहोरको थुप्रोमा खस्यो भने, तपाईंले त्यो प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि निश्चय पनि त्यसलाई धुनुहुन्छ। मिठो खाना खानेबेला, के तपाईंले फोहोर थाल र फोहोर भाँडाहरू निकाल्नुहुन्छ? तपाईं भोजमा जानुहुँदा आफूले उठाएको प्लेटमा तरकारीको लेदो भेट्टाउनुभयो भने तपाईं के हुन्छ? तपाईंलाई तरकारी त मनपर्ला, तर तपाईंले त्यो अरूको भागबाट आएको चाहिँ पराउनुहुन्न! के त्यो तपाईंको निम्ति घिनलाग्दो हुँदैन र? रेष्टुरेन्टमा खान जाने सबै मानिसहरूले केवल सफा प्लेटमात्र प्रयोग गर्छन्।
हामी सामान्यतया फोहोर कुराहरू प्रयोग गर्न इन्कार गर्छौं, र परमेश्वरले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। खुशीको खबर यो हो कि एउटा तरिकाद्वारा परमेश्वरले आफूमा विश्वास गर्नेहरूलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ, “हामीले आफ्ना पापहरू _____________ गर्यौं भने हामीलाई हाम्रा पापहरू __________ गर्न र हामीलाई _______ अधर्मबाट ____________ पार्नाका निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ” (१ यूहन्ना १:९)। यदि हामीले स्वीकार गर्ने काम गर्यौं भने, परमेश्वरले क्षमा गर्ने र शुद्ध पार्ने काम गर्नुहुन्छ। (टिप्पणी: यहाँ क्षमा शब्दले मुक्ति दिलाउने क्षमाको कुरा गर्दैन, तर यहाँ यस्तो किसिमको क्षमाको कुरा गरिएको हो जसद्वारा पाप गर्ने विश्वासी पितासँगको सङ्गतिमा पुनर्स्थापित गराइँदछ।)
विश्वासीहरूले प्राय: पापलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्। हामी पापलाई सहन अभिमुख हुन्छौं। हामी पापसित खेल्छौं र त्यसलाई ढाक्छौं। हामी पापलाई सामना गर्न र मानिलिन इन्कार गर्छौं। परमेश्वरले पापलाई अति गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ, यति गम्भीरतापूर्वक कि उक्त समस्याको समाधान गर्न उहाँले आफ्नो पुत्रलाई क्रूसमा पठाउनुभयो! पापलाई स्वीकार गर्नु भनेको परमेश्वरको सामु इमानदार हुनु र आफूले गरेको पापलाई पाप नै हो भनी मानिलुनु हो। परमेश्वरले जसरी पापलाई हेर्नुहुन्छ, हामीले पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ र परमेश्वरले जसरी पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै घृणा गर्नुपर्छ। पापहरू स्वीकार गर्दा, विश्वासीजन परमेश्वरको सामु आउँछ र यसो भन्छ, “हो, प्रभु, मैले पाप गरेको छु र मैले गरेको यही (पाप) हो। तपाईंलाई धन्यवाद छ किनभने १ यूहन्ना १:९ मा तपाईंले मेरा सबै पापहरूबाट मलाई शुद्ध गर्ने र मलाई तपाईंको सङ्गतिमा पुनर्स्थापित गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तपाईंको प्रयोगको निम्ति म एउटा सफा भाँडो हुन चाहन्छु।”
पहिलो आज्ञाको संक्षिप्त रूप: पापलाई स्वीकारै नगरी त्यसै नछोड्नुहोस्। तपाईंभित्र वास गर्नुहुने पवित्र जनलाई शोकित नपार्नुहोस्। जसरी चिकित्सकले अशुद्ध पन्जालाई प्रयोग गर्न इन्कार गर्छ, त्यसरी नै उहाँले अशुद्ध भाँडालाई भर्न इन्कार गर्नुहुन्छ।
२) पवित्र आत्मालाई ननिभाओ (१ थेस्सलोनिकी ५:१९)।
जाडोमा ताप्नको लागि बालिएको आगोको बिचार गर्नुहोस्। आगोले धेरै कुरा गर्न सक्छ। वरिपरि बसेकाहरूलाई न्यानो गराउँछ, त्यहाँ पानी पनि तताउन सकिन्छ, केही कुराहरू पोल्न पनि सकिन्छ। यदि कोही आएर एक बाल्टिन पानी त्यस आगोमाथि खन्याइदियो भने, त्यसपछि आगोले केही पनि गर्न सक्दैन। आगो निभाइएको छ।
परमेश्वरका आत्मा शक्तिशाली आगो हुनुहुन्छ र विश्वासीलाई परमेश्वरको निम्ति चहकिलो भएर बल्नलाई सहायता गर्न उहाँले सामर्थी हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रभुको निम्ति आगोमा भएझैं गराउन चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीभित्र काम गर्नुहुँदै हाम्रो जीवनमा आत्माको फल फलाउने कार्यमा हामीलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा बदल्न हामीभित्र शक्तिशाली कार्य गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ हामीभित्र प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवन जिउन चाहनुहुन्छ।
पवित्र आत्मालाई हामीभित्र उहाँको सुन्दर कार्य गर्न नदिँदा हामीले उहाँलाई निभाउँदछौं। हामीले कसरी आत्मालाई निभाउँछौं? कसरी हामीले उहाँको आगोलाई निभाउँछौं र हामीभित्र उहाँको कामलाई बाधा दिन्छौं? हरेकपटक परमेश्वरलाई “हुँदैन” भन्दा, उहाँप्रति समर्पित हुन र उहाँको इच्छा पालन गर्न अनेच्छुक हुँदा हामीले त्यसो गर्दछौं।
आफ्नै बाटोमा जान खोज्ने जिद्दीवाल खच्चरको बारेमा बिचार गर्नुहोस्। हामीले जे गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, त्यसलाई हामी इन्कार गर्छौं र आफ्नै बाटोमा हिँड्न जिद्दी गर्छौं भने परमेश्वरले कसरी हामीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ त?
त्यसकारण जब-जब हामी उहाँको इच्छालाई प्रतिरोध गर्छौं, उहाँको वचनको विरोध गर्छौं र उहाँकहाँ आफूलाई सुम्पिन इन्कार गर्छौं हामीले परमेश्वरका आत्मालाई निभाइरहेका हुन्छौं।
रोमी ६:१३ मा चाबी शब्द भेट्टाउनुहोस् (यो “सु” बाट सुरु हुन्छ): ___________। समर्पित (वा सुम्पिने) हृदय भएको विश्वासीले यसो भन्छ, “हो प्रभु, तपाईं जे चाहनुहुन्छ म त्यही गर्नेछु; तपाईं जहाँ चाहनुहुन्छ म त्यहीं जानेछु; तपाईं जे चाहनुहुन्छ, म त्यही बोल्नेछु र तपाईं जस्तो चाहनुहुन्छ म त्यस्तै हुनेछु।” परमप्रभुमा समर्पित हुनु भनेको आफ्नो मार्गमा उहाँलाई मान्नु हो, परमेश्वरको इच्छा (जे, जसरी, जुनसुकै बेला, जहाँसुकै भए तापनि) पूरा गर्न पूर्ण रूपमा इच्छुक हुनु हो।
परमेश्वरलाई हुन्छ भन्ने हो भने, हामीले आफैंलाई हुँदैन भन्नुपर्छ, “जसले मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ, उसले आफैलाई _____________ गरोस्, दिनहुँ आफ्नो क्रूस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्” (लूका ९:२३)। आफैलाई हुँदैन भनी भन्दा, मैले आनन्दसाथ परमेश्वरलाई हुन्छ भनी भन्दछु र उहाँलाई मेरो जीवनमाथि उहाँकै मार्ग र आधिपत्यलाई पूरा गर्न दिन्छु।
चिकित्सकको पन्जाबाट एउटा उदाहरण लिऔं: आत्मालाई निभाउनु भनेको चिकित्सकोक त्यो पन्जाजस्तै हो जुन कुर्सीमा वा अन्य कुनै वस्तुमा टाँसिएर बसेको छ, र चिकित्सकद्वारा प्रयोग गरिन इन्कार गरिरहेको छ। चिकित्सकले यसो भन्छ, “तिमीभित्र मेरो हात हाल्न देऊ ताकि म एउटा उदेकको कार्य गर्न सकूँ!” तर पन्जाले इन्कार गर्छ!
परमेश्वरको इच्छा जेसुकै भए तापनि, के म त्यो गर्न तयार छु, वा के म आफ्नै बाटोमा हिँड्न र आफैलाई खुशी पार्ने काम गर्न जिद्दी गर्दैछु?
३) आत्मामा हिँड (गलाती ५:१६)।
“तर म यो भन्दछु: ___________मा ____________, र तिमीहरूले शरीरको ______________ (बलियो इच्छा) कुनै रीतिले पूरा गर्नेछैनौ” (गलाती ५:१६)। आत्मामा हिँड्नुको मतलब हो आत्मामा भर परेर हिँड्नु, आत्माद्वारा हिँड्नु अथवा आत्माको माध्यममा हिँड्नु। हामीभित्र वास गर्नुहुने पवित्र आत्मा परमेश्वरको सामर्थ्यमा हामी निरन्तर हिँडिरहनु वा जिइरहनुपर्छ।
आत्मामा हिँडिरहनु भन्नु मतलब हो कि म परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नको निम्ति सहायता पाउन आत्मामा भर परिरहेको छु। म आफैले यसो गर्न सक्दिन। येशूले भन्नुभयो, “____बाट अलग भएर तिमीहरूले _________ पनि गर्न सक्दैनौ” (यूहन्ना १५:५)। यदि मैले आफ्नै सामर्थ्यमा ख्रीष्टिय जीवन बिताउन खोजेँ भने, म निश्चय लड्नेछु र विफल हुनेछु।
डोरीमा समातेर पर्खाल चढिरहेको मानिसलाई बिचार गर्नुहोस्। उक्त मानिसले यसो भन्यो भने के होला, “मैले यो डोरीलाई समातिराख्नु पर्दैन। यो नभए पनि म राम्ररी नै चढ्न सक्छु।” उसले डोरी छोड्न बित्तिकै ऊ तल भुईंमा खस्नेछ।
प्राय: जसो कठिन कुराहरूका लागि हामी परमेश्वरमा भर पर्छौं, तर त्यहाँ यस्ता कुराहरू पनि छन् जुनचाहिँ हाम्रा निम्ति सहज हुन्छन् र ती कुराहरू हामी आफैंले राम्ररी संचालन गर्न सक्छौं भनी हामी बिचार गर्छौं। स्त्रीले भन्न सक्छिन्, “भाँडा माझ्न र लुगा धुन कसलाई प्रभुको खाँचो पर्छ र? यी कुराहरू म आफैंले सजिलै गर्न सक्छु। तर प्रभु, म यदि समस्यामा परिहालेँ भनेचाहिँ, तपाईंलाई म जानकारी गराउनेछु।” पुरुषहरूको पनि जिम्मेवारीका यस्ता क्षेत्रहरू हुन्छन् जहाँ उनीहरू आफैंले सजिलै कार्य सम्पादन गर्न सक्छु जस्तो महसुस गर्छन्, जस्तै सामानहरू मर्मत गर्ने, गाडी चलाउने। यहाँ ठूलै खतरा छ। धेरै जसो हाम्रो समयहरू हामीलाई सजिलो लाग्ने र धेरै कठिन नभएका कार्यहरू गर्नमा बित्दछ, र हामीले सजिलै परमेश्वरमा भरपर्ने आचरण गुमाउन सक्छौं र हामीलाई हर समय परमेश्वरको खाँचो पर्छ भन्ने बिचार गुमाउन सक्छौं।
चिकित्सकको पन्जाबाट पनि हामी त्यही सिक्न सक्छौं। आत्मामा नहिँड्नु भनेको त्यो पन्जाले चिकित्सकलाई यस्तो भन्नु जस्तै हो, “मलाई तपाईंको कुनै खाँचो छैन। म आफैंले शल्यकृया गर्न सक्छु।” कति मूर्खतापूर्ण। पन्जाले त यस्तो भन्नुपर्ने हो, “मलाई भर्नुहुने र प्रयोग गर्नुहुने चिकित्सकको हातबिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ!”
के म पलपलमा सहायता र सामर्थ्य पाउन परमेश्वरमा भर परिरहेको छु, वा के कामकुराहरूमा सफल हुने प्रयासमा म मेरो आफ्नै सामर्थ्य र मेरो शरीरको ऊर्जामा भर परिरहेको छु? के म परमेश्वरप्रति सचेत छु? के म परमेश्वरमा भरोसा गरिरहेको छु?
आत्माले भरिएको हुन र परमेश्वरद्वारा नियन्त्रित हुन मैले पालन गर्नैपर्ने तीनओटा आज्ञाहरू छन्:
पवित्र आत्मालाई शोकित नपार।
पवित्र आत्मालाई ननिभाओ।
पवित्र आत्मामा (माध्यममा) हिँड।
विश्वासीहरूको जिम्मेवारीलाई औंल्याउने यी प्रत्येक पदहरूलाई एउटा चाबी शब्दमा सारांश निकाल्न सकिन्छ:
पवित्र आत्मालाई शोकित नपार (स्वीकार)।
पवित्र आत्मालाई ननिभाओ (सुम्प)।
पवित्र आत्मामा (माध्यममा) हिँड (भर पर)।
हामीले कुनै पनि पापलाई परमेश्वरको सङ्गतिदेखि हामीलाई वञ्चित पार्न नदिएका हौं। हामीले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न इन्कार गरेर उहाँको विरुद्ध विद्रोह नगरेका हौं। हामीले आफ्नै सामर्थ्यमा परमेश्वरको सेवा गर्न नखोजेका हौं, तर बरू हामीमा परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुने कुराहरूका लागि हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वरमा भर परेका हौं।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 22:09:282020-04-28 14:24:32आत्माले कसरी भरिने
आत्माको फल (भाग ३)
पाठ ९ — आत्माको फल (भाग ३)
आत्माको फल हो, प्रेम!
१ कोरिन्थी १३ अध्यायमा देखिएझैं प्रेमका चरित्रहरू
“आत्माको फल हो प्रे_____” (गलाती ५:२२)। जब पवित्र आत्माले विश्वासीको जीवनलाई आफ्नो अधिनतामा लिनुहुन्छ, त्यहाँ फल्ने फल प्रेम हो। यसको अर्थ के हो भनी बुझ्न परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्।
प्रेमको ग्रीक शब्द “अगापे” (agape) हो। प्रेमको सर्वोत्तम परिभाषा कुनै शब्दकोशमा हेरेर पाइँदैन, तर क्रूसमा हेरेर पाइन्छ (गलाती २:२०—“जसले मलाई __________ गर्नुभयो र आफैंलाई मेरा निम्ति दिहाल्नुभयो”)। जब हामी ख्रीष्टले क्रूसमा देखाउनुभएको प्रेमको बारेमा सोच्दछौं, हामीले एउटा बाइबलीय व्याख्या निकाल्न सक्छौं:
यो कलवरीको प्रेम हो!
“प्रेम” शब्दको अर्थ सिक्ने अर्को तरिका भनेको १ कोरिन्थी १३ अध्यायमा पाइने प्रेमको चरित्रहरू अध्ययन गरेर हो। प्रेमका यी चरित्रहरू हेर्दा, हामीले हाम्रो आफ्नै जीवनलाई जाँच्नुपर्छ। हामीले आफैंलाई यो प्रश्न सोधौं, “के परमेश्वरले मेरो जीवनमा यो फल फलाउँदै हुनुहुन्छ? के म आत्माले भरिएको विश्वासी हुँ?” यदि हुँ भने, प्रमाणस्वरूप ममा यी चरित्रहरू हुनुपर्छ। यो त्यस्तो फल हो जुन परमेश्वरले मात्र फलाउन सक्नुहुन्छ।
मेरो जीवनमा यस फलको अभाव छ भनी मैले थाह गरेँ भने मैले के गर्नुपर्छ? के मैले पाखुरा सुर्काउँदै यसो भन्नुपर्छ, “आजदेखि प्रेम गर्न सुरु गर्न म हर प्रयास गर्नेछु! म प्रेमिलो, सहनशील इत्यादि हुन आफैंलाई बल लगाउनेछु।” होइन, यसरी हुनै सक्दैन। यदि ममा यो फलको अभाव छ भने, परमेश्वरसितको मेरो सम्बन्धमा केही खराबी छ भनी मैले महसुस गर्नुपर्छ। के मैले साँच्चै मुक्ति पाएको छु? के साँच्चै ममा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ? अनि यदि मैले मुक्ति पाएको छु भने, के कुनै तरिकाले मैले पवित्र आत्मालाई वाधा दिँदैछु वा शोकित पार्दैछु वा निभाउँदैछु? कुनै न कुनै तरिकाले मैले अवरोध गरिरहेको हुनुपर्छ र मैले ख्रीष्टलाई ममा आफ्नो जीवन जिउन दिइरहेको छैन। यदि फलमा केही खराबी छ भने, जरामा नै केही खराबी हुनुपर्छ। फल भनेको प्रेम हो; र जराचाहिँ जीवित परमेश्वरसितको मेरो सम्बन्ध हो। अर्को शब्दमा, प्रेमको विषयमा मैले चिन्ता नै गर्नुपर्दैन किनभने परमेश्वरले नै त्यसको चिन्ता गर्नुहुनेछ। बरू, मैले त येशू ख्रीष्टसितको मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धको बारेमा बढी चासो राख्नुपर्छ।
हाम्रो अर्को पाठमा (पाठ १०) हाम्रो जीवनमा आत्माको फल देखिनको निम्ति कसरी हामी पवित्र आत्माले भरिन सक्छौं भनी अध्ययन गर्नेछौं।
यस पाठमा हामी १ कोरिन्थी १३:४-८ मा भएका प्रेमका चरित्रहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। आजको दिनमा “प्रेम” शब्दको अर्थ साँघुरो पारिएको छ जसको अर्थ साधारण तवरले गरिबहरूलाई वा अन्य खाँचोमा परेकाहरूलाई पैसा दिनु भन्ने बुझिन्छ।
१ कोरिन्थी १३:४-८ मा प्रेमलाई व्यक्तिकरण गरिएको छ। कुनै मानिस हो झैं गरी प्रेमको व्याख्या गरिएको छ। “प्रेमले खूबै सहन्छ” भन्नुको सट्टा “पवित्र आत्माले नियन्त्रण गरिएको मानिसले खूबै सहन्छ” वा “ख्रीष्टसित ठीक सम्बन्ध भएको मानिसले खूबै सहन्छ” वा “मभित्र ख्रीष्टले खूबै सहनुहुन्छ” पनि भन्न सकिन्छ।
प्रेमले खूबै सहन्छ
सहनशीलता आत्माको फल हो (गलाती ५:२२)। यस शब्दको अर्थ हो, “रिसाउनमा ढिलो, क्रोधित हुन धेरै समय लाग्ने, छिट्टै नरिसाउने, धीरज (विशेष गरी मानिसहरूसँग), आफ्ना कृयाकलाप वा आफ्ना शब्दहरूले ठेस खुवाउने, हानि पुर्याउने वा आवेशमा ल्याउने मानिसहरूप्रति धीरज”। विश्वासी जन रिसाउनमा ढिलो हुनुपर्छ, बदला लिने वा क्रोध देखाउने सवालमा ढिलो हुनुपर्छ। आफैंलाई जाँच्नुहोस्। यदि कोही तपाईंप्रति आवेगमा आउँछ भने, के ऊप्रति पनि आवेग आउन तपाईं छिट्टो हुनुहुन्छ? अरूहरूद्वारा आवेशमा ल्याइँदा के आफ्नो धीरज गुमाउन तपाईं छिट्टो हुनुहुन्छ? के तपाईं छिट्टै क्रोधित बन्नुहुन्छ?
२ शमूएल १६:५-१०, १३ पढ्नुहोस्। दाऊदले कसरी सहनशीलता देखाए?
परमेश्वरले कसरी सहनशीलता देखाउनुहुन्छ (२ पत्रुस ३:९; भजनसङ्ग्रह १०३:८)?
प्रेम दयालु हुन्छ
हामीलाई रिस उठाउने प्रति क्रोधित नहुनु (सहनशिलता) एउटा कुरा हो; दया पाउने बिल्कुलै योग्य नभएको व्यक्तिलाई दया देखाउनु झन् अर्कै कुरा हो! यस शब्दले “अनुग्रहपूर्ण दया” लाई जनाउँदछ, अर्थात्, यस्तो दया जुन पाउने योग्यको छैन। लूका ६:३५ मा, कस्ता किसिमका मानिसहरूप्रति दयालु हुन प्रभुले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ? ____________________________________________________ एफेसी ४:३२ मा हामीलाई खराबी गर्नेहरू प्रति र हामीद्वारा क्षमा गरिनुपर्नेहरूप्रति दयालु हुन हामीलाई आज्ञा दिइएको छ।
एफेसी २:७ मा हामीजस्ता कुनै पनि दया पाउन अयोग्य मानिसहरूतर्फ परमेश्वरको अचम्मको दयाको बारेमा सिक्दछौं। हामी किन दया पाउने योग्यका छैनौं? किनभने हामी पापहरूमा मरेका छौं, क्रोधका सन्तान हौं र आज्ञा नमान्ने सन्तान थियौं (एफेसी २:१-३)। तरैपनि, यी सबै कुराहरूको बाबजूद पनि, परमेश्वर हामीप्रति दयालु हुनुभयो र ख्रीष्टमा हाम्रो निम्ति मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभयो। वास्तवमा, एफेसी २:७ ले अनुग्रहको सुन्दर परिभाषा दिँदछ, ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीप्रति उहाँको अनर्जित (हामी लायक नभएको) दया! तीतस ३:४ ले बताउँदछ, “तर जब हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरका ________ र मानिसप्रतिको प्रेम प्रकट भए”। तीतस ३:३ मा उल्लेखित मानिसहरूसँग परमेश्वर कसरी यस्तो दयालु हुन सक्नुहुन्छ? साँच्चै यो यस्तो दया हो जसको निम्ति हामी अलिकति पनि योग्यका छैनौं! १ पत्रुस २:३ पढ्नुहोस् (र भजनसङ्ग्र ३४:८ सित तुलना गर्नुहोस्)। के तपाईं प्रति प्रभु दयालु र कृपामय हुनुहुन्छ भनी तपाईंले चाख्नुभयो? के तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा उहाँको दयाको अनुभव गर्नुभयो? हामी परमेश्वरको क्रोध पाउने योग्यका छौं, उहाँको दया होइन।
यदि म जस्तो पापीको निम्ति उहाँ त्यस्तो दयालु हुन सक्नुहुन्छ भने, उहाँले निश्चय पनि मेरो जीवनमा काम गर्न र ममा दयालुपनाको फल फलाउन सक्नुहुन्छ!
प्रेमले डाहा गर्दैन
“डाहा” शब्दको अर्थ हो ईर्ष्या, डाहाले उर्लनु, अरूसँग भएको कुरा चाहनु र कुनै व्यक्तिसँग भएको कुराको कारणले ऊप्रति क्रूद्ध हुनु। हामीले अरूहरू फलिफाप भएको, सफल भएको, समुन्नत भएका देख्छौं र हामीलाई त्यो मन पर्दैन। प्रेरित ७:९ मा बताइएको छ कि कुलपतीहरू (यूसुफका दाजुहरू) ले “_________” गरे। तिनको रङ्गबिरङ्गी लबेदा (बाबुको कृपापात्रवादको चिन्ह) को कारणले उनीहरूले यूसुफलाई घृणा गरे, र उनीहरूको डाहाले घृणा उत्पन्न गर्यो। उनीहरूले तिनलाई खाडलमा फ्याँकिदिए र त्यहीँ मर्नको निम्ति छोडिदिन खोजे, तर अन्त्यमा मिद्यानी व्यापारीहरूको हातमा दासको रूपमा तिनलाई बेचिदिए। उनीहरूलाई यूसूफको भलाइको कुनै वास्ता थिएन। डाहा र प्रेम सँगै रहन सक्दैनन्।
प्रेमले आफ्नो प्रशंसा गर्दैन
“प्रशंसा” को अर्थ हो, आफ्नै योग्यता वा उपलब्धिको प्रदर्शन गर्नु, घमण्ड गर्नु, आत्मप्रशंसा गर्नु, बगम्फुस कुरा गर्ने व्यक्ति जस्तो व्यवहार देखाउनु। यसको अर्थ आफ्नै प्रशंसाहरू गरेर र आफैंलाई प्रदर्शन गरेर अरूहरूलाई प्रभावित पार्न खोज्नु र उनीहरूबाट इज्जत र वाहवाह पाउन खोज्नु हो। बाइबलले भन्दछ, “तिम्रो प्रशंसा अर्काले गरोस्, तिम्रो आफ्नै __________ चाहिँ _________” (हितोपदेश २७:२)। आफ्नै प्रशंसाको गीत गाउनेको आवाज जहिले पनि उच्च नै हुन्छ!
३ यूहन्ना ९-१० मा आफ्नै प्रशंसा गर्ने मानिसको उदाहरण दिइएको छ। डियोट्रेफेस बगम्फुस गर्ने, मूर्खतापूर्वक र अतिशय गरेर (“बढी”) कुरा गर्ने मानिस थियो। उसमा भाइहरूप्रति प्रेम थिएन। उसको एउटै इच्छा भनेको पहिलो स्थान पाउनु, आफैंलाई उचाल्नु थियो।
उदेकको मुक्तिदातामा घमण्ड गर्न, हाम्रा शब्दहरू र हाम्रा कामहरूले निरन्तर उहाँलाई नै उचाल्न परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्!
प्रेम घमण्डले फुलिँदैन
“घमण्डले फुलिनु” शब्दको अर्थ हो, “फुल्लिनु, पड्किन थाल्नु, आकारमा वृद्धि हुनु, घमण्डले गमक्क पर्नु”। त्यसैले यसको मतलव अहङ्कारी हुनु हो। पावलले कोरिन्थीहरूको माझमा अकसर यस शब्दको प्रयोग गरे किनभने उनीहरूको माझमा घमण्डको समस्या थियो: हेर्नुहोस् १ कोरिन्थी ४:६-७; ४:१८-१९; ५:२; ८:१-२। प्रेम घमण्डले फुलिँदैन, तर प्रेमले उन्नति गराउँछ (१ कोरिन्थी ८:१)। परमेश्वरले हामीमा फुल्लिएको घमण्डको हावालाई निकाल्नुभएको होस् र हाम्रो घमण्डको फोकालाई फुटाइदिनुभएको होस्। जब कुनै कुरा फुल्लिन्छ, यो झन्-झन् ठूलो हुँदै जान्छ। परमेश्वरले हामी झन्-झन् सानो भएको चाहनुहुन्छ। “उहाँ ________________, तर मचाहिँ _______________” (यूहन्ना ३:३०)।
प्रेम रूखो व्यवहार गर्दैन
रूखो व्यवहार गर्ने उही हो जसले अनुपयुक्त, अनुचित, अपमानपूर्ण, निन्दापूर्ण र अभद्रतापूर्ण तवरले व्यवहार गर्दछ। यो यस्तो व्यक्तिको आचरण हो जो असभ्य छ, जसमा उचित व्यवहारको कमी छ, जसले आफू लज्जित हुनुपर्ने किसिमको काम गरिरहेको छ। यो यस्तो व्यवहार हो जसमा असल सद्भावना, भद्रता र उचित आचरणहरूको कमी हुन्छ।
यदि कुनै मानिस भलादमी हुनुपर्छ भने, विश्वासी नै हुनुपर्छ। यदि कुनै मानिसमा असल सद्भावना, भद्रता र उचित आचरणहरू हुनुपर्छ भने, परमेश्वरको सन्तानमा नै हुनुपर्छ। के तपाईंले कहिल्यै प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रशोधन र शुद्ध गर्ने प्रभावको बारेमा विचार गर्नुभएको छ? जब एउटा मानिसले अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाउँछ, ऊ पापको नालीबाट बाहिर निस्कन्छ र परमेश्वरका आत्माले उसलाई शान्त पार्न, उसको मुख सफा गर्न, उसको पूरै चरित्र भिन्न नभए सम्म प्रशोधन गर्न सक्नुहुन्छ।
परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिएको मानिसले रूखो व्यवहार गर्दैन। बरू ऊ हाम्रा महान् र अनुग्रहकारी परमेश्वरको शिक्षालाई सजाउन योग्यको हुन्छ (तीतस २:१०)।
प्रेमले आफ्नै भलाइ खोज्दैन
प्रेम स्वार्थी हुँदैन। स्वार्थी मानिसले आफ्नै भलाइ खोज्छ; उसले प्रथम श्रेणीको मानिस (ऊ आफैं) को होशियारीसाथ निगरानी गर्छ। उसले आफ्नै कुराहरू र फाइदाहरूको खोज गर्छ। परमेश्वरका आत्माले हामीलाई हाम्रो आफ्नै कुराहरूबाट बाहिर आउन, परमेश्वरलाई महिमा दिने बारेमा खोज गर्न र हाम्रो व्यक्तिगत मूल्य वा बलिदानको परवाह नगरीकन आफ्नो छिमेकीको भलाइ खोज्न सहायता गर्नुहुन्छ।
“कुनै मानिसले पनि आफ्नै ‌____________ नखोजोस्, तर हरेकले अर्काको भलाइको __________ _______________” (१ कोरिन्थी १०:२४)। के पावलले आफ्नै भलाइ खोजे (१ कोरिन्थी १०:३३)? ______________ के उनले अरूहरूले पनि मुक्ति पाउन् भनेर उनीहरूकै भलाइ गर्न खोजे (१ कोरिन्थी १०:३३)? _______________
मानिस कुन कुराको पछि लाग्नु हुँदैन (फिलिप्पी २:४)?
_______________________________________________________ बरू, उसले कुन कुराको बरेमा फिक्री गर्नुपर्छ (फिलिप्पी २:४)?
_______________________________________________________ अधिकांश मानिसहरूले कुन कुराको खोज गर्छन् (फिलिप्पी २:२१)?
_______________________________________________________ हामीले के खोजेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (फिलिप्पी २:२१)?
हामीहरूले परमेश्वरको इच्छा र अरूहरूको भलाइको चासो राख्न परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्।
प्रेम झडङ्ग रिसाउँदैन
“झडङ्ग रिसाउनु” भनेको झोंकिनु, क्रोधित हुनु, रिसमा उत्तेजित हुनु। पवित्र आत्माले भरिएको मानिसले यसो भन्छ, “म अरूहरूद्वारा आफूलाई रिसमा उत्तेजित हुन र क्रोधित बनाइन इन्कार गर्छु। उनीहरूद्वारा मेरो शान्तपनालाई गुमाइन म दिनेछैन।” परमेश्वरका आत्माले विश्वासीलाई नियन्त्रण गर्नुहुँदा, ऊ शान्त, ठन्डा र संयमित रहन सक्छ।
हिब्रू १०:२४ को प्रकाशमा विश्वासीले यसो भन्न सक्छ, “अरूलाई म एउटै तरिकाले मात्र आफूलाई उत्तेजित पार्न दिनेछु। प्रेम र असल कामहरू गर्न मेरो सङ्गी विश्वासीलाई म आफूलाई उत्तेजित पार्न दिनेछु। तर खराब तरिकाले मलाई उत्तेजित गराउन मानिसहरूलाई म अनुमति दिन इन्कार गर्दछु”।
प्रेमले खराबीको हिसाब राख्दैन
“हिसाब राख्नु” भनेको “ठान्नु, खातामा हाल्नु, हिसाब गर्नु”। यो शब्दावलीले गन्ती (वा गन्ने काम) लाई बुझाउँछ र यसको अर्थ हुन्छ हिसाब गर्नु, गन्नु, खातामा राख्नु। आत्माले भरिएको मानिसले खराबीको हिसाब राख्दैन। निजले आफूलाई गरेको खराबीको हिसाब गर्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, प्रेमले खराबीको कुनै लेखाजोखा राख्दैन।
खाताको पुस्तिका लिएको मानिसको कल्पना गर्नुहोस् जसले यसो भन्दैछ, “यही महिनामा तिमीले मसँग निर्दयी शब्द बोलेको यो पाँचौं पटक हो। यसलाई म टिपेर राख्छु।” प्रेमले खराबीलाई ऋणको रूपमा आफ्नो खातामा चढाउँदैन। प्रेमले यसो भन्दैन, “म तिमीलाई यो फिर्ता तिर्नेछु! मैले यसलाई चिन्ह लगाएर र टिपेर राखेको छु। म यो बिर्सने छैन र म क्षमा गर्ने छैन!”
के तपाईंले पनि खाता पुस्तिका राखेर आफ्नो दिमागमा खराबीको हिसाब राखिरहनु भएको छ?
यदि परमेश्वरले हामीले गरेका खराबीहरूको निम्ति खाता पुस्तिका राख्नुभएर तिनलाई हाम्रो विरोधमा गन्ती गर्नुभएको भए हामी कहाँ हुनेथियौं? “हे याह, तपाईंले अधर्महरूको __________ लिनुभयो भने ता, को ____________ रहन सक्ला र?” (भजनसङ्ग्रह १३०:३)। यदि परमेश्वरले हाम्रा सबै पापहरू टिप्नुहुने र तिनलाई हाम्रो विरोधमा राख्नुहुने हो भने, हामी सबै नाश हुनेथियौं! भजनसङ्ग्रह १३०:४ मा कुन असल खबर पाइन्छ?
के तपाईं आफ्नो खाता पुस्तिका फालिदिन र जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टको कारणले तपाईंलाई क्षमा गर्नुभएको छ, त्यसरी नै अरूहरूलाई क्षमा गर्न तयार हुनुहुन्छ?
प्रेम अधर्ममा आनन्दित हुँदैन
“अधर्म” भनेको अधार्मिकता हो, अर्थात् जे खराब छ त्यही कुरा, जे ठीक छ त्यसको उल्टो, सत्यताको मापदण्डसँग मेल नखाने।
कुनै व्यक्तिले खराबी गर्दा तपाईंको आचरण कस्तो हुन्छ? तपाईंले अरूहरूको खराबीप्रति र तपाईंको आफ्नै खराबीप्रति समेत कस्तो प्रतिकृया राख्नुहुन्छ? के तपाईं त्यसमा आनन्दित बन्नुहुन्छ? के तपाईं त्यसमा खुसी बन्नुहुन्छ?
आत्माले भरिएको मानिसले अरूहरूमा र आफ्नै जीवनमा देखिएका खराब कार्यहरूमा आनन्दित हुने कुनै कारण भेट्टाउँदैन।
अधर्ममा हामी आनन्दित हुनुहुँदैन भने, हामीले के गर्नुपर्छ त? “आनन्दित” शब्दको विपरीत हो, विलाप गर्नु, शोक मनाउनु, रुनु, दु:खी हुनु। खराब कार्यहरूप्रति हामीले कत्तिको चासो राख्छौं? हामीले पाप र खराबीको कारणले हृदयमा शोकित भएर रोएको कति समय अगाडि हो?
१ कोरिन्थी ५:१ मा ठूलो खराबी र अधर्म गरिएको बारेमा पढ्न सक्छौं। कोरिन्थीहरूको प्रतिकृया कस्तो हुनुपर्नेथियो (२ पद)?_______________________________________
पापप्रति विश्वासीको प्रतिकृयाको निम्ति याकूब ५:८-९ पढ्नुहोस्।
प्रेम सत्यमा आनन्दित हुन्छ
यद्यपि विश्वासी निश्चय नै सत्यमा आनन्दित हुनैपर्छ, १ कोरिन्थी १३:६ लाई यसरी अनुवाद गरिनुपर्छ, “प्रेम सत्यसित आनन्दित हुन्छ”। ख्रीष्टसँग ठीक सम्बन्धमा भएको मानिस सत्यसित आनन्दित हुन्छ।
यसको मतलव के हो? यदि म तपाईंसित आनन्दित छु भने, यसको मतलव हो हामी दुवैजना आनन्दित छौं। तपाईं आनन्दित हुनुहुन्छ र म आनन्दित छु। म तपाईंसित आनन्दित छु।
यस पदमा “सत्य” लाई व्यक्तिकरण गरिएको छ। सत्यलाई आनन्द मनाउने कुनै व्यक्तिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। सत्यले म ऊसित आनन्दित भएको चाहन्छ, आनन्दित हुन म ऊसित सम्मेलित भएको चाहन्छ। के सत्य अधर्ममा आनन्दित हुन्छ? हुँदै हुँदैन। सत्य जे ठीक छ त्यसमा आनन्दित हुन्छ।
जुनसुकै कुरामा सत्य आनन्दित होला, म त्यसैमा आनन्दित हुनेछु र जुनसुकै कुरालाई सत्यले दोषी ठहराउला, म त्यसमा आनन्दित हुनेछैन।
यदि कसैले तपाईंलाई नराम्रो किसिमको चुटकिला वा भद्रताको सिद्धान्त विपरीतको कथा सुनायो भने, आफैंलाई यो प्रश्न गर्नुहोस्, “के सत्य यसमा आनन्दित हुन्छ?”
एउटा सङ्गी विश्वासी गहिरो पापमा फस्छ। के सत्य त्यसमा आनन्दित हुन्छ? मानौं यही विश्वासीले आफ्नो पापको पश्चापत्ताप गर्छ, शोक मनाउँछ, दु:खित हुन्छ र परमेश्वरको सामु स्वीकार गर्छ। के सत्य यसमा आनन्दित हुन्छ?
यदि तपाईंले सत्यलाई व्यक्तिकरण गर्नुभयो भने, तपाईंले कुन व्यक्तिलाई पाउनुहुनेछ? यदि तपाईंले सत्यबाट एउटा व्यक्ति बनाउनुभयो भने, तपाईं कसलाई देख्नुहुनेछ (यूहन्ना १४:६ हेर्नुहोस्)? ___________________________________ येशू ख्रीष्टबाहेक कसैमा पनि सत्य व्यक्तिकरण हुनसक्दैन। आत्माले भरिएको मानिस ख्रीष्टसित आनन्दित हुँदछ। उसले भन्छ, “जुनसुकै कुरामा ख्रीष्ट आनन्दित हुनुहोला, म त्यसैमा आनन्दित हुनेछु। जब ख्रीष्ट आनन्दित हुनुहुनेछ, म आनन्दित हुनेछ। जब ख्रीष्ट शोकित हुनुहुनेछ, म पनि शोकित हुनेछु।”
प्रेम गर्ने विश्वासीले सबै कुराहरूलाई ख्रीष्टको नजरबाट देख्दछ।
प्रेमले सबै कुरा सहन्छ
“सहनु” शब्दको मतलव केही निश्चित कुराहरू र अवस्थाहरूलाई सहनु वा थेग्नु। बाइबलमा यो प्राय: प्रयोग गरिने शब्द होइन; नयाँ नियममा यो केवल चार पटक मात्र प्रयोग गरिएको छ।
१ कोरिन्थी ९:१२ मा पावलले यस शब्दको प्रयोग गरेका छन्, “तर ख्रीष्टको सुसमाचारलाई कुनै प्रकारको बाधा नदिऔं भनेर हामी सबै कुराहरू सहन्छौं”। पावलले के भन्न खोजेको भनेर बुझ्न, सर्वप्रथम हामीले १ कोरिन्थी ९:१४ मा भएको सिद्धान्तलाई बुझ्नु पर्छ: “यही प्रकारले _____________ प्रचारकहरूले पनि सुसमाचारबाट ____________ ______________ गरून्…”। यसको मतलब साँचो सुसमाचारका प्रचारकहरू परमेश्वरका जनहरूबाट सहायता पाइने योग्यका हुन्छन्। १ कोरिन्थी ९:७ मा भएको तीन प्रश्नहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस्। सेनाहरूले आफ्नो सेवाको निम्ति पारिश्रमिक पाउँछन्। दाखबारी लगाउने मानिसले त्यसका फलबाट आनन्द लिन्छ। गोठाला गर्नेले बगालका भेडाहरूको दुध पिउँछ। त्यस्तैगरी पास्टरको पनि बगाल हुन्छ। यदि प्रचारकले आफ्नो बगालको निम्ति आत्मिक भोजनको प्रबन्ध गर्छ भने, के बगालले उसको भौतिक र आर्थिक खाँचोहरूको निम्ति प्रबन्ध गर्नु पर्दैन?
१ कोरिन्थी ९:१२ मा पावलले यसो भन्न खोजेका हुन्, “विश्वासीहरूबाट सहयोग पाउने अधिकार हामीसँग छ। तलब पाउने हाम्रो अधिकार छ। तर हामीले यो अधिकार प्रयोग गरेका छैनौं।” बरू पावलले आफ्नै हातहरूले पाल बनाउँदै आफैलाई सहयोग गर्दथे। पावलले आफ्नै निम्ति प्रबन्ध गर्नुपर्दैन थियो; विश्वासीहरूले उनलाई सहयोग गर्नु पर्ने थियो, तर कसैले पनि गलत तरिकाले नबुझुन् र उनले पैसाको लागि मात्र सेवा गरिरहेका छन् भनी नसोचुन् भनी पावल चाहन्थे। त्यसैले पावल सबै कुराहरू सहन इच्छुक थिए (१२ पद)। ख्रीष्टको कार्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति आफ्ना अधिकारहरू र विशेष लाभहरूलाई पनि त्याग्न उनी इच्छुक थिए। पावलको निम्ति पालहरू बनाउनु सजिलो थिएन किनभने त्यो समयमा उनले ख्रीष्टको खोजेर नसकिने धनहरूको बारेमा प्रचार गर्न मन पराउनेथिए, तर उनी त्यस कठोर परिश्रमलाई पनि सहन इच्छुक थिए।
हाम्रो बारेमा चाहिँ के? के हामीले भाइहरूको खातिर हाम्रा केही अधिकारहरू वा स्वतन्त्रताहरूलाई त्याग्न इच्छुक छौं? अरूको निम्ति ठेस लाग्ने ढुङ्गा बन्न पुग्छौं कि भनी के हामी आफ्ना केही कुराहरू त्याग्न इच्छुक छौं? अरूहरूको भलाइको निम्ति के हामी पीडा वा हाम्रा निम्ति आवश्यक कुराहरूको अभाव सहन इच्छुक छौं?
आत्माले भरिएको मानिसको यस्तो आचरण हुन्छ, “म खाँचोमा पर्न इच्छुक छु। म मेरा अधिकारहरूलाई त्याग्न इच्छुक छु। मेरो जीवनशैलीलाई बदल्न इच्छुक छ। मेरो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने हरेक हटाइनुपर्ने कुराहरूलाई हटाउन इच्छुक छु।” प्रेम नगर्ने मानिस अरूहरूको खातिर धेरै कुराहरू सहन अनेइच्छुरक हुन्छ।
“सहनु” शब्द “ढाक्नु” भन्ने अर्थमा पनि हुन सक्छ। प्रेमले अनावश्यक रूपमा अरूहरूको विफलतालाई सार्वजनिक गर्दैन। “प्रेमले चाहिँ अनेकौं पापहरू ढाक्नेछ” (१ पत्रुस ४:८)।
प्रेमले सबै कुरा विश्वास गर्छ
निश्चय पनि यस वाक्यांशको अर्थ हामीहरू सजिलैसँग ठगिने हुनुपर्छ भन्ने होइन। हामी सजिलैसँग छकाइन सक्ने हुनुहुँदैन। हामीलाई भनेका सबै शब्दहरू हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। मानिसहरूले अकसर बोल्ने भर नपर्दा शब्दहरू वा कुराहरूमा हामीले भरोसा गर्नुहुँदैन। धोका खान सजिलो छ।
अर्को विकल्प भनेको आत्माले भरिएको मानिसले परमेश्वरले भन्नुभएका सबै कुराहरू विश्वास गर्छ भनी बुझ्नु हो। यो सत्य कुरा हो, परमेश्वरको मुखबाट निस्केका प्रत्येक शब्दहरू हामीले विश्वास गर्नुपर्छ किनभने परमेश्वरको वचन एकदम सत्य छ (यूहन्ना १७:१७), तर यहाँ यसको अर्थ त्यो होइन। परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नु भनेको विश्वासको गुण हो, तर यहाँ हामीलाई प्रेमको गुण दिइएको छ।
यसको साँचो अर्थ यो हो, कि आत्माले भरिएको मानिसले सबै कुराहरू विश्वास गर्छ, अर्थात्, ऊ शङ्कालु मानिस होइन। शंकालु मानिसले यसो भन्छ, “मलाई तिम्रो केही कुरामा शङ्का लागेको छ। तिमी केही कुराको दोषी छौ भनी मलाई शङ्का छ।” विश्वासीले कसैको पछाडि गरिएको कुरा सुन्न इन्कार गर्नुपर्छ, “तिम्रो निराधार गफ सुन्न म इन्कार गर्छु। उक्त मानिसको बारेमा तिमीले गरेका खराब कुराहरू म सुन्नेछैन किनभने यस कुरालाई प्रमाणित गर्न तिमीसँग कुनै आधारहरू र प्रमाणहरू छैन।” ख्रीष्टको प्रेम देखाउने मानिसले कुनै मानिस दोषी भएकै कुरा प्रमाणित नभएसम्म ऊ निर्दोष छ भनी विश्वास गर्न इच्छुक हुन्छ, र कुनै मानिसले आफ्नो बचाउको निम्ति भनेका कुराहरूको विरोधमा पक्का प्रमाण नभएसम्म ती कुराहरूलाई विश्वास गर्न र स्वीकार गर्न ऊ इच्छुक हुन्छ। प्रेमले सबै कुराहरू विश्वास गर्छ, अर्थात्, प्रेमले कुनै पनि कृयाकलापहरू वा घटनाहरूमा हर सम्भव तरिकाले सर्वोत्तम अर्थ लगाउने कोसिस गर्छ।
प्रेमले सबै कुराको आशा गर्छ
जब विश्वासी जनले भविष्यतर्फ नजर लगाउँछ, उसमा सकारात्मक आशा हुनुपर्छ। हाम्रो परमेश्वरले भविष्यमाथि नियन्त्रण राख्नुहुन्छ र सबै कुराहरू हाम्रो भलाइ र उहाँको महिमाको निम्ति पूरा गर्नुहुन्छ। विनाशको बाटोमा लागिरहेको यस पापले श्रापित संसारमा हिँड्दा, परमेश्वरले उहाँको योजना र कार्यक्रम पूरा गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको आगमन झन्-झन् नजिक हुँदैछ भनी जान्दै हामी सकारात्मक बन्न सक्छौं। परमेश्वरले सर्वोत्तम र सर्वोत्कृष्ट कार्य गर्नुहुन्छ भनी हामीले आशा गर्न सक्छौं! हामीले बाइबल पढेका छौं र परमेश्वरले नै जित्नुहुनेछ भनी हामी जान्दछौं! हामी हारको होइन तर विजयको पक्षमा छौं। हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू (महा-विजेताहरू!) भन्दा पनि बढी छौं (रोमी ८:३७)।
प्रेमले सबै कुरामा धीरज धर्छ
हामी आत्माले भरिँदा, जीवनका अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई सहन, जीवनका कठिनाइहरूमा साहससाथ धीरज धर्न, त्यहाँ खडा रहन र ठूला संकष्टहरूमा पनि लागिरहन परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। विश्वासीहरू ठूला-ठूला सतावटहरूमा पनि आनन्दसाथ धीरज धर्न सक्छन्। सुरुका विश्वासीहरू “उहाँका नामका निम्ति ______________ _________ लायकका ठहरियौं भनेर _____________________________ उनीहरू महासभाका सामुबाट निस्केर गए” (प्रेरित ५:४१)। प्रेमले साहससाथ कठिनाइहरू र सतावटहरूको सामना गर्दछ।
हामी प्रभु येशू ख्रीष्टका हौं भनी सबै मानिसहरूले कसरी थाह पाउनेछन् (यूहन्ना १३:३५)?
परमेश्वरले हामीलाई आत्माको फल देखाउन सहायता गर्नुभएको होस्, जुनचाहिँ प्रे______ हो (गलाती ५:२२)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 22:05:392020-04-28 14:24:32आत्माको फल (भाग ३)
पाठ ८ — आत्माको फल र विश्वासीको निम्ति परमेश्वरको उद्देश्य (भाग २)
यो काम कसरी हुन्छ? यो काम हामीले परमेश्वरको वचनको ऐनामा हेर्दै जाँदा हुन्छ। यसले बताउँदछ, “हेर्दै-हेर्दै … बदलिँदै जान्छौं”। परमेश्वरको वचनमा प्रस्तुत गरिएको येशू ख्रीष्टको तस्वीरमा हाम्रा आँखाहरूलाई स्थिर पार्दैजाँदा बदली हुवाइको कार्य हुँदछ।
“हेर्दै-हेर्दै … बदलिँदै जान्छौं”। हामी जे हेर्छौं, हामी छिट्टै त्यस्तै हुन्छौं! हामी जे हेर्छौं, हामी त्यस्तै हुन्छौं। जसले हाम्रो ध्यान खिँच्छ, त्यसले हामीलाई नै खिँच्छ। हामीहरू राम्रो अनुकरणकर्ताहरू हौं। हामी आफूले देखेको कुराको नक्कल गर्न खोज्छौं। केही अवस्थाहरूमा, लामो समयसम्म वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएकाहरू धेरै तरिकाले एक-अर्काजस्तै हुन्छन्। किन यस्तो हुन्छ भने उनीहरूले धेरै वर्षसम्म दिनहुँ एकअर्कालाई हेर्दै आएका छन् र केही तरिकाहरूमा एक अर्काको नक्कल गर्न थालेका हुन्छन्। हामीले जे हेर्छौं र जुन कुरामा ध्यान दिन्छौं, हामी त्यस्तै हुन खोज्छौं।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 22:02:292020-04-28 14:24:32आत्माको फल र विश्वासीको निम्ति परमेश्वरको उद्देश्य
आत्माको फल (भाग १)
पाठ ७ — आत्माको फल (भाग १)
सुन्दर फलदायी जीवन हरेक विश्वासीको निम्ति परमेश्वरको योजना हो।
यूहन्ना १५:१-१७ पढ्नुहोस्।
शास्त्रको यस खण्डका चाबी शब्दहरू के के हुन् (प्राय: दोहोरिएका शब्दहरू)?
यूहन्ना १५:२,८,१६ फ______ यूहन्ना १५:४,५,६,७ रहनु
विश्वासीको निम्ति परमेश्वरको योजनालाई ध्यान दिनुहोस्। उहाँ फल चाहनुहुन्छ, उहाँ धे____ फल चाहनुहुन्छ (२ पद) र उहाँ धे____ फल चाहनुहुन्छ (८ पद)। विश्वासीको सर्वोच्च इच्छा भनेको परमेश्वर महिमित हुनुभएको होस् भन्ने हुनुपर्छ। परमेश्वर कसरी महिमित हुनुहुन्छ (८ पद)? _____________________________________________
गलाति ५ मा “आत्माको फल” को बारेमा बताउने पद खोज्नुहोस्। पद ________ विश्वासीजन आत्माले भरिनुपर्छ (एफेसी ५:१८)। जब यसो हुँदछ, परमेश्वरले आत्माको फल फलाउनुहुन्छ। यो विश्वासी आफैंले गर्न सक्ने कार्य होइन; यो त केवल परमेश्वरले गर्नसक्नुहुने कार्य हो।
हामीले फलको बारेमा राम्ररी सोच्नुपर्छ। निम्न कुराहरूलाई विचार गर्नुहोस्:
१) फल भनेको जीवनको अभिव्यक्ति हो।
फल सजीव रचनाद्वारा फलाइने कुरा हो। फल जीवनको परिणाम हो। मरेका रूखहरूले फल फलाउँदैनन्। चट्टानहरूले फल फलाउँदैनन्। केवल जीवित बोट, बिरुवा वा रूखले मात्र फल फलाउन सक्छ। आत्माको फल परमेश्वरको जीवनको परिणाम हो। परमेश्वरको जीवन नभएसम्म कसैमा पनि परमेश्वरको फल हुन सक्दैन। एउटा मानिसले कसरी परमेश्वरको जीवन प्राप्त गर्न सक्छ (१ यूहन्ना ५:११-१२)?
फल भित्री जीवन र सामर्थ्यको बाहिरी र दृश्यमान अभिव्यक्ति हो। उदाहरणको निम्ति, स्याउको रूखमा भित्री जीवन, सामर्थ्य, पोषक तत्व र द्रव नहुने हो भने त्यहाँ स्याउ हुन सक्दैन। अङ्गुरको झुप्पा बोटको भित्री जीवनको देख्न सकिने र बाहिरी अभिव्यक्ति हो। गलाती २:२० मा उल्लेख गरिएको भित्री जीवन र सामर्थ्यलाई बिचार गर्नुहोस्—“ख्रीष्ट ___भित्र _____________”। याद राख्नुहोस्, यो “आ____को फल” हो (गलाती ५:२२), र परमेश्वरको आत्मा जीवन र सामर्थ्यले भरपूर हुनुहुन्छ (रोमी ८:२ सित तुलना गर्नुहोस् जहाँ उहाँलाई “जी________ आत्मा” भनी सङ्केत गरिएको छ)।
२) स्वस्थ रूखबाट असल फल फल्दछ।
स्वस्थ रहनु नै फल फलाउने कार्यको रहस्य हो। किन केही रूखहरू वा बोटहरूले असल फल फलाउँदैनन्? त्यहाँ केही सम्भावित समस्याहरू हुन सक्छन्: तुषार, रोग, झुसिल्किरो, अन्य हानिकारक किराहरू इत्यादि। स्वस्थ रूखले अलस फल फलाउँछ। मत्ती ७:१७-१८ हेर्नुहोस्। विश्वासीजन आत्मिक रूपमा स्वस्थ, साथै प्रभुसित ठीक सम्बन्धमा रहिरहनुपर्छ । उसले व्यवस्थावाद (उसको आफ्नै कामहरूले परमेश्वरलाई खुशी पार्न सक्छु भनी सोच्नु—गलाती ३:१-३) ररूपवाद (भित्री सामर्थ्य र वास्तविकताको अभावलाई बाहिरी धार्मिक कार्यहरूद्वारा ढाक्न सकिन्छ भनी सोच्नु—२ तिमोथी ३:५) जस्ता रोगहरूको सामना गर्नुपर्छ। यी रोगहरूले ख्रीष्टको जीवनलाई निसास्याइदिन्छ र क्रूसतर्फको हेराइलाई धमिल्याइदिन्छ। विश्वासीजन ख्रीष्टमा रहनैपर्छ र उहाँमा जोडिनै पर्छ (यूहन्ना १५:१-५) किनभने हामी रहनु पर्ने एउटै मात्र स्वस्थ स्थान भनेको नै साँचो बोटसँग जोडिरहनु हो।
३) प्रकृतिमा फलहरू प्राकृतिक रूपमै फल्दछ।
नास्पातीको रूखले नास्पाती निकाल्नको निम्ति कडा परिश्रम, मेहनत र प्रयत्न गर्दैन, नता नास्पाती ननिस्केला कि भनेर चिन्ता र सन्ताप नै गर्दछ। यसको ठीक उल्टो, नास्पातीको रूख पोषक तत्व लिँदै स्वस्थ रहन्छ, र प्राकृतिक रूपमा नै नास्पातीहरू फल्दछन्।
गोलेभेडाका बोटहरूको बारेमा बिचार गर्नुहोस्। के उनीहरू परिश्रम गर्छन्, पसिना निकाल्छन् र मेहनत गर्दै यसो भन्छन्, “ओहो, हामीले जसरी भए पनि गोलभेडा फलाउनैपर्छ”? होइन, परमेश्वरले प्राकृतिक रूपमा नै गोलभेडाहरू फलाउनुहुन्छ।
त्यस्तै गरी, आत्माको फल मानिसको अथक प्रयास वा शारीरिक सङ्घर्षको परिणाम स्वपरूप आउँदैन। फल परमेश्वरको कार्य हो, र उहाँ सर्वोत्तम फल फलाउन विशेषज्ञ हुनुहुन्छ।
४) फलले पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ
हाम्रो प्रभुले भन्नुभयो, “यसकारण, निश्चय नै तिनीहरूकै __________द्वारा तिमीहरूले तिनीहरूलाई ______________” (मत्ती ७:२०)।
रूखमा स्याउ झुन्डिएको देखियो भने, त्यो स्याउको रूख हो भनी पक्का भइन्छ। तपाईंले आफ्नो बगैंचामा कुनै बोट हुर्किरहेको देख्नुभयो भने, तपाईंले त्यो के हो भनी ठम्याउन नसक्नुहोला, तर तपाईंले त्यस बोटमा खरबुजा फलेको देख्नुभयो भने, तपाईंले सजिलै त्यो बोटको पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै बोटमा गोलभेडा फलिरहेको देखियो भने, त्यो गोलभेडाको बोट हो भनी निश्चित भइन्छ।
तपाईंले कुनै मानिसमा आत्माको साँचो फल प्रदर्शन भइरहेको देख्नुभयो भने, उसमा परमेश्वरको आत्माले काम गरिरहनुभएको छ भनी तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यसरी सोधेको पाइन्छ, “कसरी एउटा व्यक्तिले ऊभित्र परमेश्वरको आत्मा वास गर्नुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिन सक्छ?” उसले अन्यभाषामा बोल्नु नै सबै भन्दा ठूलो प्रमाण होइन (कसै-कसैले यही विश्वास गर्छन्) नता कुनै भावुक किसिमको अनुभव नै हो; सबै भन्दा ठूलो प्रमाण भनेको फल हो। आत्माको फल भनेको ऊभित्र वास गर्नुहुने भित्री व्यक्ति, जीवन र सामर्थ्यको बाहिरी र दृश्यमान प्रमाण हो। ती व्यक्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
गलाती ५:२२ मा “फल” शब्द एकवचनमा छ। यस पदमा नौओटा गुणहरू सूचीकृत भए तापनि यसले “आत्माका फलहरू” भनी भन्दैन। एकवचन शब्द “फल” ले एकतालाई सङ्केत गर्दछ। नौओटा गुणहरू सूचिकृत भए तापनि, यो एउटै झुप्पा जस्तै हो, अङ्गुरको झुप्पा जस्तै।
यो फल कसले फलाएको हो? झुप्पा कहाँबाट आएको हो? यो “आ______को फल” हो (गलाती ५:२२)। यो फल परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट आउँदछ। यो फल उहाँले विश्वासीभित्र फलाउनुहुने फल हो। पिताको महिमा गर्ने फल हामीभित्र फलाउन काम गर्नुहुने सामर्थी शक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ। यहाँ “ख्रीष्टियनको फल” भनिएको छैन। यो हामी आफैंले फलाउन सक्ने कुरा होइन। फल हामीबाट आउँदैन; यो त परमेश्वरबाट आउँछ। हामीले के फलाउँदो रहेछौं भनी जान्न चाहनुहुन्छ भने, गलाती ५:१९-२१ पढ्नुहोस्!
आत्माले मात्र आत्माको फल फलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले भन्नुहोला, “एकछिन! मेरो एउटा अविश्वासी छिमेकी हुनुहुन्छ जो साह्रै प्रेमिलो, कृपालु र अरूको भलाइ गर्ने किसिमको हुनुहुन्छ। मेरो एकजना अविश्वासी आफन्त पनि हुनुहुन्छ जो निकै आनन्दित हुनुहुन्छ र मैले चिनेका केही ख्रीष्टियनहरूलाई भन्दा त उहाँलाई नै २२ पदको व्याख्या एकदम सुहाउँछ जस्तो लाग्छ।” यो सबै सत्य हुन सक्छ, तर वास्तविकता त यही हो कि केवल आत्माले मात्र आत्माको फल फलाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको आत्माले मात्र वास्तविक प्रेम फलाउन सक्नुहुन्छ। अन्य सबै सस्तो, मानवीय, नक्कली फल हो। परमेश्वरले मात्र आनन्द फलाउन सक्नुहुन्छ, र बाँकी सबै मानिसद्वारा फलाइएको नक्कली आनन्द हो। हामीले परमेश्वद्वारा फलाइएको सक्कली फल र मानिसद्वारा र शरीरद्वारा फलाइएको नक्कली फलको बीचमा भिन्नता राख्नुपर्छ।
मानिसको फल र परमेश्वरको फल बीच भिन्नताहरू: शरीरले दयालु साथीहरू, परिवार, पती वा पत्नी र दयालु मानिसहरूलाई प्रेम गर्न सक्छ। आत्मिक मानिसले आफूलाई गरिएको घृणा, विमुखता वा सतावटको बावजुद पनि प्रेम गर्न सक्छ। शरीरले छुट्टिका दिनहरूमा र जीवनका रमाइला क्षणहरूमा आनन्द गर्न सक्छ। आत्मिक मानिसले क्यान्सर रोगले थलिएको अवस्थामा, प्रिय जनको चिहानको सामु र दिनहुँ गर्नु पर्ने कामहरूको नैरास्यतामा पनि आनन्द गर्न सक्छ। शरीरले शान्त कोठामा वा नदीमा बहेको कुनै डुङ्गामा, वा कुनै कथाको हँसिलो-खुशिलो अन्त्यमा शान्ती (वा मेलमिलाप) को अनुभव गर्न सक्छ। आत्मिक मानिसले समस्याहरू, दबाबहरू र दु:खहरूमा पनि शान्ती (वा मेलमिलाप) को अनुभव गर्न सक्छ।
परमेश्वरको आत्माले मात्र आत्माको फल फलाउन र चम्काउन सक्नुहुन्छ, र परमेश्वरको आत्मा ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसको हृदयमा मात्र वास गर्नुहुन्छ। आफूसँग पवित्र आत्मा नहुनुभएको अविश्वासीमा (यहूदा १९) कहिल्यै पनि आत्माको फल हुन सक्दैन।
गलाती ५:२२ कसरी सुरु भएको छ भनी ध्यान दिनुहोस्। यो पद सानो “तर” भनिने शब्दबाट सुरु भएको छ। यो भिन्नता देखाउने शब्द हो। आत्माको फललाई यही अध्यायमा उल्लेख गरिएको अर्कै कुरासँग, अर्थात् “शरीरका कामहरू” सँग (गलाती ५:१९-२१) तुलना गरी भिन्नता देखाइएको छ। शरीरका कामहरू ती कुराहरू हुन् जुन कुराहरू मानिसको आफ्नै प्रयासले फल्दछन्। ती कुराहरू मानिसको पापी स्वभावका फल हुन्। पापचाहिँ जरा हो; शरीरका कामहरूचाहिँ पुरानो स्वभावका फलहरू हुन्।
गलाती ५:१६ लाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। यो पदले दुईमध्ये कुनै एक अवस्थालाई वर्णन गर्दछ। तपाईं कि त आत्मामा हिँडिरहनुभएको छ (आत्माको फल देखाउँदै) अथवा तपाईं शरीरको अभिलाषा पूरा गर्दैहुनुहुन्छ (शरीरका कामहरू देखाउँदै)। दुईमध्ये कुनै एक। विश्वासीको हृदयभित्र युद्ध चलिरहेको हुन्छ (गलाती ५:१७ पढ्नुहोस्)। यो युद्ध आधिपत्यताको युद्ध हो। तपाईं कि त आत्माद्वारा नियन्त्रण गरिनुहुन्छ कि शरीरद्वारा? तपाईंले के शरीरले आफ्नो फल फलाउनेछ कि परमेश्वरले? अर्को दुईमध्ये कुनै एक अवस्थालाई गलाती २:२० मा उल्लेख गरिएको छ — “म होइन, तर ख्रीष्ट…” यदि यो स्व-जीवन हो भने, यो ख्रीष्ट-जीवन हुन सक्दैन; यदि यो ख्रीष्ट-जीवन हो भने, यो स्व-जीवन हुन सक्दैन। यी दुई पूर्ण रूपमा अमिल्दो कुराहरू हुन्।
“अब शरीरका कामहरू प्र_______ छन्” (गलाती ५:१९)। पावलले त्यसपछि शरीरले फलाउने यी भयानक कामहरूको सूची बनाउँछन् (१९-२१)। “प्रकट” को माने हो, दृश्यमान, स्पष्ट देखिने, खुल्ला, प्रत्यक्ष, परिचित, व्यक्त गरिएको, सुस्पष्ट। “प्रकट” शब्द “लुकेको, छिपेको, गुप्त” को ठीक उल्टो हो। शरीरका कामहरू गोप्य कुराहरू होइनन्। यी कामहरू देखा पराइमा खुल्ला, सबैले देख्न सक्ने र अति सुस्पष्ट छन्। अर्को शब्दमा, यदि तपाईं शरीरमा हिँडिरहनुभएको छ भने र तपाईंलाई यो थाह छैन भने पनि तपाईं बहानारहित हुनुहुन्छ! यदि तपाईं शरीरमा हिँडिरहनुभएको छ भने र तपाईंलाई यो थाह छैन भने, तपाईंले सुस्पष्ट कुरालाई देख्नबाट गुमाउनुभएको छ र सबैको निम्ति खुल्ला रहेको कुरालाई देख्नबाट तपाईं चुक्नुभएको छ। यी कामहरू “प्रकट” छन् भनी परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ। ती कुराहरू प्रत्यक्ष, स्पष्ट देखिने र सबैको निम्ति खुल्ला छन्। यी अपगुणहरूलाई हामीले ठम्याउन सकौं भनेर परमेश्वरले हामीलाई यो जम्मै सूची दिनुभएको छ। परमेश्वरले यी कुराहरूलाई अति स्पष्ट तरिकाले लेखिदिनुभएको छ। हरेक विश्वासीले आफू शरीरमा हिँडिरहेको छु कि आत्मामा हिँडिरहेको छु भनी राम्ररी छुट्याउनु सक्नुपर्छ। हामीहरू शरीरमा हिँडिरहेका छौं कि आत्माद्वारा डोर्याइएका छौं भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ र यो थाह गर्न कठीन हुनुहुँदैन।
स्त्रीहरू किनमेल गर्न जाँदा, उनीहरू राम्रो फल र नराम्रो फलहरूको बीचमा भिन्नता पत्ता लगाउने काम राम्ररी गर्न सक्छन्। उनीहरूले राम्रो गोलभेडा छान्दछन् र खराब वा कुहिन लागेका गोलभेडाहरूलाई इन्कार गर्छन्। उनीहरू राम्रो स्याउ र कुहिएको स्याउ, राम्रो फल र नराम्रो फलहरूबीच भिन्नता छुट्याउन निपुण हुन्छन्। कुन अङ्गुरहरू राम्रा देखिएका छन् र कुन अङ्गुरहरू नराम्रा देखिएका छन् भनी उनीहरू जान्दछन्। आत्मिक जगतमा पनि, हामीले राम्रो फल र खराब फलहरू बीच भिन्नता छुट्याउनुपर्छ।
यस्ता समयहरू हुन्छन् जब एउटा विश्वासीले आफैंलाई रोक्नुपर्छ र परमेश्वरको सामु इमान्दारसाथ यसो भन्नुपर्छ, “त्यो शरीरको कुहिएको काम हो। परमेश्वरले त्यो फलाउनुभएको होइन। त्यो मेरो काम हो। केही खराबी छ। मैले आत्मालाई निभाइरहेको वा शोकित पारिरहेको हुनसक्छु। परमेश्वरको जीवन मबाट बाहिर बहनलाई कुनै कुराले बाधा दिरहेको छ। यस समयमा परमेश्वरसितको मेरो सम्बन्ध स्वस्थ छैन र यी कुराहरू ठीकठाक नहोउन्जेल म सन्तुष्ट हुनेवाला छैन।”
विश्वासीहरू घण्टौंसम्म र केही दिनसम्म पनि शरीरका कामहरू फलाउँदै गइरहनु कति दु:ख लाग्दो कुरा हो। आफूहरू जसरी हिँड्नुपर्ने हो त्यसरी नहिँडेको कुरा उनीहरूलाई थाह छ, र उनीहरूले त्यसको बारेमा थोरै मात्र चिन्ता गरेको र समस्या समाधान गर्न केही पनि नगरेको जस्तो देखा पर्छ। यदि तपाईंको धाराबाट फोहोर, गन्हाउने, हिलो जस्तो पानी आउन थाल्यो भने, तपाईंले जति सक्दो छिट्टो त्यो समस्या समाधान गर्न केही न केही गर्नुहुनेथियो भनी म निश्चित छु। येशूले भन्नुभयो, “जसले ममाथि विश्वास गर्छ, पवित्रशास्त्रले भनेअनुसार, उसको हृदयबाट जिउँदो पानीका नदीहरू _____________! तर यो कुरा उहाँले आ______ विषयमा भन्नुभयो” (यूहन्ना ७:३८-३९)। यो त्यही जिउँदो नदी जसलाई गलाती ५:२२-२३ मा वर्णन गरिएको छ। यो जिउँदो नदी परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा फलाइन्छ र उक्त नदी परमेश्वरको जीवनको कारणले बहन्छ। हामी अन्य कुनै पनि नदीबाट सन्तुष्ट नभएका हौं।
शरीरले फलाउने हिलाम्मे, फोहोर र घिनलाग्दो नदीको बारेमा बिचार गर्नुहोस् (गलाती ५:१९-२१):
२१ पदको अन्तिम वाक्यांशले धेरै मानिसहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ र यसलाई प्राय ठीकसँग बुझिएको छैन: “यस्ता-यस्ता काम गर्नेहरू परमेश्वरका राज्यका हकवाला हुनेछैनन्।” जब हामीले यी शारीरिक, पापपूर्ण कामहरूका सूचीको बारेमा सोच्दछौं, विश्वासीहरू नै भए तापनि हामी हरेकले आफैंलाई यी कुराहरूमध्ये कुनै न कुनै कुराहरूमा दोषी भेट्टाउँदछौं। हामीहरूमध्ये कसले इमानदारीसँग यसो भन्न सक्ला, “मैले मुक्ति पाएदेखि, मैले कहिल्यै पनि द्वेष गरेको छैन”? हामीहरूमध्ये कसले यसो भन्न सक्ला, “मैले आफैंलाई सधैँ मूर्तीहरूबाट जोगाइ राखेको छु (१ यूहन्ना ५:२१)। मैले कहिल्यै पनि मेरो जीवनमा कुनै कुरालाई परमेश्वरको स्थान लिन दिएको छैन किनभने मैले हरेकपटक प्रभुलाई नै पहिलो स्थानमा राखेको छ!”? अवगुणहरूका यो सूचीले हामीहरूमध्ये हरेकलाई दोषी ठहराउँछ। ख्रीष्टियनहरू भए तापनि हामीले शरीरका कामहरूलाई हाम्रो व्यवहारमा उतारेका छौं। यी कुराहरूलाई हामीले घृणा गरे तापनि, हामीले हाम्रो दोषलाई स्वीकार गर्नैपर्छ र भन्नैपर्छ, “शरीरमा हिँड्ने विषयमा म दोषी छु। शरीरका कामहरूमध्ये केही कुराहरू मेरो जीवनमा पनि प्रकट भएका छन्।”
“यस्ता-यस्ता काम गर्नेहरू परमेश्वरका राज्यका हकवाला हुनेछैनन्।” यसको अर्थ, के हामी राज्यबाट बहिस्कृत गरिनेछौं? १ कोरिन्थी ६:९-११ लाई विचार गर्नुहोस्। तपाईले ९-१० पदहरू पढ्नुभयो भने हाम्रो निम्ति त्यहाँ कुनै आशा छैन! तर असल खबरचाहिँ ११ पदमा पाइन्छ। परमेश्वरले किन दोषी पापीहरूलाई आफ्नो राज्यमा सम्मिलित गराउन सक्नुहुन्छ? ___________________________________________________________________________ के हामी आफूले कतिको असल गरेका छौं भन्ने आधारमा राज्यको हकवाला भयौं कि ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति के गरिदिनुभएको छ भन्ने आधारमा? __________________________________________________
गलाती ५:२१ लाई बुझ्ने चाबीशब्द भनेको “गर्नेहरू” भनिने सानो शब्द हो। यो कृयापद वर्तमानकालमा प्रयोग भएको छ र यसले स्वभाविक आचरणलाई जनाउँछ: “यस्ता यस्ता काम गरिरहनेहरू” वा “यस्ता यस्ता कामहरू अभ्यास गर्नमा लागिरहनेहरू”। गलाती ५:१९-२१ मा वर्णन गरिएका यी शरीरका कामहरूमा लिप्त भएकाहरू र यसैमा निरन्तर लागिरहनेहरू र ती अभ्यास गरिरहनेहरू जस्ता मानिसहरू राज्यका हकवाला हुनेछैनन्। यदि कुनै मानिसको जीवन शरीरका कामहरूले भरिएको र तीद्वारा दमन गरिएको छ भने, योचाहिँ त्यस व्यक्तिले मुक्ति नै नपाएको हुन सक्ने लक्षण हो।
यस सूचीमा उल्लेख गरिएका केही पापहरूमा विश्वासीहरू फस्नु दु:खलाग्दो सत्यता हो, तर यी पापहरू उनीहरूका जीवनका नियमित चरित्रचाहिँ हुँदैनन्। हिलोमा खस्नु एउटा कुरा हो; हिलोमै जिउनु अर्कै कुरा हो। भेँडा हुनु र कहिलेकसो हिलाम्मे हुनु एउटा कुरा हो; सुङ्गुर हुनु र हिलोलाई नै जीवनको मार्ग बनाउनु र त्यसमै रमाउनु (त्यसमा आनन्द लिनु) अर्कै कुरा हो! विश्वासीजन पापभित्र खस्छ तर उसले यसलाई घृणा गर्छ; मुक्ति नपाएको व्यक्ति पापमा जिउँछ र त्यसलाई प्रेम गर्छ।
नूह मत्त भए, तर तिनी मतवाला थिएनन्। सामान्यतया तिनको जीवन धार्मिकताले भरिएको थियो। अब्राहामले आफ्नी श्रीमतीको बारेमा झूट बोले, यद्यपि उनी त्यस पापमा फसे, तिनी यही पापमा लागिरहेनन्। दाऊदले व्यभिचार गरे र आफ्नो पापलाई लुकाउन त्यस स्त्रीको श्रीमानको हत्या गरे। तरैपनि, दाऊद यही पापमा लागिरहेनन्। तिनको हृदय शोकित भएको थियो र तिनले आफ्ना पापहरू स्वीकार गरे र धार्मिकताको मार्गमा फर्किएर आए (भजनसङ्ग्रह ५१ र भजनसङ्ग्रह ३२)। पत्रुसले प्रभुलाई तीन-तीन पल्ट इन्कार गरे र यो जति सुकै गम्भिर किसिमको पाप भए तापनि, यसले पत्रुस जीवनको चरित्र नै औंल्याएको थिएन। पेन्टेकोस्टको दिनमा पत्रुसले हिम्मतसाथ हजारौंको सामु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरे (प्रेरित २:३६)। यदि तपाईंले प्रभुलाई इन्कार गरिरहेको पत्रुसको तस्वीर लिनुभयो भने, ख्रीष्टलाई इन्कार गर्ने यही हो भनी भन्नुहुनेथियो। तरैपनि, यदि तपाईंले उसको नयाँ जन्म पाएको पूरै जीवनको नै भिडियो लिनुभयो भने, यो व्यक्ति आफू मर्नै परे तापनि ख्रीष्टलाई साहससाथ र घरी-घरी स्वीकार गर्ने मानिस थियो भनी तपाईंले निश्कर्ष निकाल्नुहुने थियो। उनको जीवनको बारेमा यो अध्याय कुरूप भए तापनि, ख्रीष्टलाई इन्कार गर्नु नै उनको जीवनको मूल चरित्र थिएन।
एकसमय हामीले जिउने गरेको जीवन र हामीले अहिले जिइरहेको जीवनमा क्रूसले भिन्नता ल्याएको छ (गलाती २:२० हेर्नुहोस्)। के १ कोरिन्थी ६:९-१० मा वर्णन गरिएका मानिसहरूको निम्ति केही आशा छ? क्रूसले भिन्नता दिलाउन सक्छ भनी ११ पदमा हामी सिक्दछौं!
के क्रूसले तपाईंको जीवनमा भिन्नता ल्याएको छ? ख्रीष्टियन भएकोमा तपाईं पक्राउ पर्नुभयो भने, के त्यहाँ तपाईंलाई दोष लगाउने पर्याप्त प्रमाणहरू हुनेछन्? के त्यहाँ प्रयोग गर्दा-गर्दा च्यातिएको बाइबल भेट्टाइने छ? तपाईंले प्रभुको बारेमा गवाही दिनुभएको केही साक्षीहरू खडा हुन सक्छन्? कुनै रूखले आफू स्याउको रूख भएको दाबी गर्दछ भने, हामीले उक्त रूखलाई चुनौती दिएर यसो भन्न सक्नुपर्छ, “तिमी साँच्चैको स्याउकै रूख हौ भनी मलाई प्रमाणित गर। मलाई तिम्रा स्याउहरू देखाऊ! ” याद राख्नुहोस्, फलले पहिचान गराउँदछ (मत्ती ७:१७-१९ हेर्नुहोस्)।
मत्ती १२:३३ लाई बिचार गर्नुहोस्। मानिसले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो, रूखलाई असल बनाउनु। तपाईं मुक्ति पाएको व्यक्ति हुनुहुन्न भने, फललाई असल बनाउने कोसिस नगर्नुहोस्। फल असल हुन रूख असल हुनैपर्छ। तपाईं ख्रीष्टियन हुनुहुन्न भने, ख्रीष्टिय जीवन जिउनु तपाईंको निम्ति असम्भव कुरा हो। त्यसो गर्नुभनेको पेट्रोलबिना गाडी गुडाउने प्रयास गर्नु जस्तै हो, अथवा प्यारासुट (parachute) नलिई प्लेनबाट हामफाल्न खोज्नु जस्तै हो। त्यसले कुनै फाइदा दिनेछैन। तपाईंसँग परमेश्वरका आत्मा (रोमी ८:९) हुनुहुन्न भने, आत्माको फल फलाउने कोसिसै नगर्नुहोस्। यो असम्भव हुनेछ। पहिले रूखलाई असल बनाउनुहोस्, जसको अर्थ हो, तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नु (प्रेरित १६:३१) र परमेश्वरलाई तपाईंलाई नयाँ सृष्टि बनाउन दिनु (२ कोरिन्थी ५:१७) हो। ख्रीष्टबिना तपाईंले ख्रीष्टिय जीवन जिउन सक्नुहुन्न। पवित्र आत्माबिना तपाईंले पवित्र जीवन जिउन सक्नुहुन्न।
मत्ती १२:३४-३५ मा प्रभु येशूले अर्को किसिमको फलको बारेमा कुरा गर्दैहुनुहुन्छ, अर्थात् ओंठहरूका फल। जसरी फलले रूखलाई प्रकट गर्दछ, ठीक उसरी नै हाम्रो बोल्ने शैलीले हाम्रो हृदयलाई प्रकट गर्दछ: “किनकि _____________ भरपूरीबाट नै मुखले _______________” (मत्ती १२:३४)। हाम्रो मुखबाट निस्केका शब्दहरूले हाम्रो हृदयको अवस्थालाई प्रकट गरिरहेका हुन्छन्। काममा वा स्कूलमा वा खेल्ने चउरमा भएको मानिसले गाली गरिरहेको वा फोहोर भाषा प्रयोग गरिरहेको छ भने, उसको हृदय प्रकट भइरहेको हुन्छ! फोहोर शब्दहरूले फोहोर, नविकरण नभएको हृदयलाई प्रकट गर्दछ। सफा शब्दहरूले सफा हृदयलाई प्रकट गर्छ किनभने “असल मानिसले ____________ असल ढुकुटीबाट ___________ कुराहरू निकाल्छ” (मत्ती १२:३५)।
विश्वासीहरू फलवान भएका परमेश्वर चाहनुहुन्छ! उहाँ धे______ फल चाहनुहुन्छ (यूहन्ना १५:२) र उहाँ धे______ फल चाहनुहुन्छ (यूहन्ना १५:८)। येशूले कस्तो किसिमको फलको कुरा गरिरहनुभएको थियो? के उहाँले स्याउहरू वा अङ्गुरहरू वा खरबुजाहरूको कुरा गरिरहनुभएको थियो? गलाती ५:२२ मा हामीलाई बताइएको छ कि आत्माको __________ हो १) ______________ २) _______________ ३) ______________ (पहिलो तीनओटा मात्रै लेख्नुहोस्)। यूहन्ना १५:९-१० मा कुन फलको कुरा गरिएको हो? ________________ यूहन्ना १५:११ र यूहन्ना १६:२०,२२ मा कुन फलको कुरा गरिएको हो? _______________ के यो गलाती ५:२२ मा भएको उही फल हो? ______________
हामी “हरेक असल काममा फ_____________ हुँदै” गएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (कलस्सी १:१०)। हामी कस्तो नभएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ? (तीतस ३:१४ अन्तिमतिरको शब्द) _______________________
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 21:59:342020-04-28 14:24:32आत्माको फल (भाग १)
पाठ ६-आत्माको बप्तिस्मा
आत्माको बप्तिस्मा सम्बन्धी चाबी पद १ कोरिन्थी १२:१३ हो—“किनकि चाहे हामी यहूदी हौं चाहे ग्रीक, चाहे हामी कमारा हौं चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै __________ एउटै शरीरभित्र ____________ (डुबाइएनु, राखिनु) भयौं; र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दिइयो।” यस पदमा बताइएको “एउटै शरीर” भनेको मण्डली हो। “र सबै कुराहरू उहाँका पाउहरूमनि पारिदिनुभयो, र उहाँलाई सबै कुराहरूमाथि ________ हुनाका निम्ति __________लाई दिनुभयो, जोचाहिँ उहाँको __________ हो अर्थात् उहाँको परिपूर्णता, जसले सबै कुरामा सबै कुराहरू भरिदिनुहुन्छ” (एफेसी १:२२-२३)। “अनि उहाँ _________ अर्थात् ____________ _________ हुनुहुन्छ” (कलस्सी १:१८)। मण्डलीलाई ख्रीष्टको शरीर भनिएको छ, र ख्रीष्ट उक्त शरीरको शिर हुनुहुन्छ।
आत्माको बप्तिस्मालाई १ कोरिन्थी १२:१३ मा परमेश्वरको कार्य भनिएको छ जुन कार्यद्वारा विश्वासीहरू ख्रीष्टको शरीर, अर्थात् मण्डली भित्र बप्तिस्मा (डुबाइनु, राखिनु) गराइन्छन्। त्यसोभए कसरी एउटा विश्वासी ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग बन्दछ? आत्माको बप्तिस्माद्वारा।
यस खण्डले मण्डली कहिले सुरु भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ खुलस्त पार्ने चाबी दिँदछ। हामीले सर्वप्रथम आत्माको बप्तिस्मालाई बुझ्यौं भने, मण्डली कहिले सुरु भयो भनी हामीले निर्धारण गर्न सक्नेछौं। परमेश्वरले सर्वप्रथम विश्वासीहरूलाई आफ्नो शरीरमा कहिले बप्तिस्मा दिनुभयो? विश्वासीहरू सर्वप्रथम कहिले ख्रीष्टको शरीरमा राखिए? यसको जवाफ दिनु भनेको मण्डली कुन दिनमा सुरु भयो भनी निर्धारण गर्नु हो।
आत्माको बप्तिस्माको बारेमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले सर्वप्रथम मत्ती ३:११ मा भविष्यवाणी गरेका थिए (साथै मर्कूस १:८; लूका ३:१६; यूहन्ना १:३३)।
“साँच्चै, पश्चात्तापका निम्ति म तिमीहरूलाई __________ बप्तिस्मा दिन्छु, तर जो मपछि आउनुहुन्छ, उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने लायकको म छैनँ; उहाँले तिमीहरूलाई __________ _________ र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ” (मत्ती ३:११; तुलना गर्नुहोस्, मर्कूस १:८; लूका ३:१६; यूहन्ना १:३३)।
यूहन्नाको बप्तिस्मा पानीको बप्तिस्मा थियो (“म तिमीहरूलाई पानीमा बप्तिस्मा दिन्छु”); ख्रीष्टको बप्तिस्मा आत्मिक बप्तिस्मा हुनेथियो (उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ)। “आगोको बप्तिस्मा” मुक्ति नपाएकाहरूको निम्ति हो र त्यसमा इन्साफ सम्मिलित हुन्छ। यो “आगोको बप्तिस्मा” भविष्यको कुरा हो (मत्ती ३:१२)।
यस वाक्यांशलाई ध्यान दिनुहोस्, “उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा…ले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ”। “बप्तिस्मा दिनुहुनेछ” मा प्रयोग भएको क्रियापद भविष्यत् कालमा छ। यसको अर्थ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यी शब्दहरू बोल्दाहुँदि आत्माको बप्तिस्मा सुरु भइसकेको थिएन। यो कुरा भविष्यमा हुनेछ भनी यूहन्नाले प्रचार गरिरहेका थिए, तर यो ठीक कुन समयमा हुनेछ भनी उनले पूर्वसूचना गरेनन्। यो पनि ध्यान दिनुहोस्, बप्तिस्मा दिनेवाला ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टको शरीरमा स्थानान्तर गराउनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ। मण्डली बनाउनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ (मत्ती १६:१८)। हामी केही क्षणमा अध्ययन गर्नेछौं, १ कोरिन्थी १२:१३ मा बप्तिस्मा दिनुहुने पनि ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ।
मत्ती १६:१८ मा प्रभु येशूले भन्नुभयो, “म आफ्नो मण्डली ___________”। यस कृयापदको भविष्यत् कालले मण्डलीको निर्माण कार्य येशूले यी शब्दहरू बोल्नुहुँदा भइसकेको थिएन भनी सङ्केत गर्दछ। उहाँले यसो भन्नुभएन, “मैले आफ्नो मण्डली बनाएको छु।” उहाँले यसो पनि भन्नुभएन, “म आफ्नो मण्डली बनाउँदैछु।” होइन, निर्माण परियोजना सुरु भइसकेको थिएन र मण्डली अझै भविष्यमै थियो। येशूले मत्ती १६:१८ का शब्दहरू बोल्नुहुँदा मण्डली सुरु भइसकेको थिएन।
आज ख्रीष्टले आफ्नो मण्डली बनाउँदै हुनुहुन्छ। दिनुहुँ उहाँले _________ पाउनेहरूलाई ____________ थप्दैहुनुहुन्छ (प्रेरित २:४७ हेर्नुहोस्)। तर प्रश्न आउँछ, निर्माण परियोजना कहिले सुरु भयो?
प्रेरित १:५ मा प्रभु येशूले आत्माको बप्तिस्मा अझै भविष्यमा नै रहेको कुरा बताउनुभयो:
“किनभने यूहन्नाले साँच्चै पानीमा बप्तिस्मा दियौ; तर अब केही __________ तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा गरिनेछौ” (प्रेरित १:५)।
हाम्रो प्रभुको अगमवाणी अनुसार, आत्माको बप्तिस्मा त्यस घडी सम्म भइसकेको थिएन, तर यो छिट्टै हुनेवाला थियो। एकै जना पनि ख्रीष्टको शरीरमा डुबाइएको थिएन। त्यसैले, प्रेरित १:५ अगाडि मण्डली सुरु भइसकेको हुन सक्दैन। येशूले प्रेरित १:५ का शब्दहरू बोल्नुहुँदा, उहाँको मृत्यु र उहाँको बौरिउठाइ भइसकेको थियो, तरैपनि त्यस समयसम्म आत्माको बप्तिस्मा भइसकेको थिएन, पवित्र आत्मा आइसक्नुभएको थिएन, र मण्डली बनिसकेको थिएन। तरैपनि प्रेरित १:५ को अगमवाणी निकै उल्लेखनीय थियो किनभने येशूले आत्माको बप्तिस्मा “केही दिनपछि” (त्यस समयदेखि धेरै दिन पर्खनुपर्दैन) हुनेछ भनी भन्नुभयो। यसको अर्थ त्यो घटना छिट्टै हुनेछ, केही दिनमै। साँच्चै, हामीले सिक्नेछौं, उक्त घटना केवल १० दिनपछि पेन्टेकोस्टको दिनमा घट्यो।
पेन्टेकोस्टको दिन र उक्त दिनमा घटेका अनौठा घटनाहरूलाई प्रेरित २ अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। यस अध्यायमा आत्माको बप्तिस्मालाई तोकिएरै बताइएको छैन। पेन्टेकोस्टको दिनमा आत्माको बप्तिस्मा भएको थियो भनी हामीलाई एकैचोटी प्रेरित ११ मा मात्र तोकिएरै बताइएको छ, “अनि जब म बोल्न थालें, तब पवित्र आत्मा, जसरी _________ (पेन्टेकोस्टको दिनमा) हामीहरूमाथि ओर्लनुभएको थियो, उसरी नै उनीहरूमाथि ओर्लनुभयो। तब प्रभुले यसो भन्नुभऐको वचन मलाई सम्झना भयो, ‘यूहन्नाले साँच्चै पानीमा बप्तिस्मा दिए, तर तिमीहरू पवित्र आत्माले ___________ गरिनेछौ’” (प्रेरित ११:१५-१६)। यस खण्डको स्पष्ट भनाइको आधारमा, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा सर्वप्रथम पेन्टेकोस्टको दिनमा भएको थियो भनी हामी जान्दछौं। विश्वासीहरू सर्वप्रथम त्यही दिनमा ख्रीष्टको शरीरमा संलग्न गराइएका थिए। मण्डली त्यही दिनमा सुरु भएको थियो।
तर कोही-कोहीले आपत्ति जनाउलान् र यसो भन्लान्, “मत्ती ३:११ र प्रेरित १:५ मा उल्लेख गरिएको आत्माको बप्तिस्मा १ कोरिन्थी १२:१३ मा उल्लेख गरिएको आत्माको बप्तिस्माभन्दा बेग्लै कुरा हो। मत्ती ३:११ र प्रेरित १:५ मा बप्तिस्मा दिनुहुने व्यक्ति ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तर १ कोरिन्थी १२:१३ मा मा बप्तिस्मा दिनुहुने व्यक्ति ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।” झट्ट पढ्दा यस्तो लागे तापनि मत्ती ३:११ र प्रेरित १:५ का ग्रीक शब्दावलीहरू व्यावहारिक रूपमा १ कोरिन्थी १२:१३ सँग समान छन्। तलको चार्टले यो स्पष्ट पार्दछ।
यी सबै पदहरूले उही बप्तिस्माको कुरा गरिरहेको छ, र यी चारओटै पदहरूका ग्रीक संरचना एकदम मिल्दोजुल्दो छन्। निम्न चार्टमा गरिएको अक्षरश: उद्दरणले स्पष्ट पार्दछ।
ग्रीकको “en” अव्यय (नामयोगी) लाई हाम्रो नेपाली बाइबलमा “एउटै आत्माद्वारा” भनी अनुवाद गरिएको छ (१ कोरिन्थी १२:१३) जसको कारण बप्तिस्मा दिनुहुने पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ भन्ने गलत निश्कर्षमा कोही-कोही पुगेका छन्। तर यस पदलाई यसरी बुझिनुपर्छ, “एउटै आत्मासित एउटै शरीरमा (ख्रीष्टक शरीर, अर्थात् उहाँको मण्डली) बप्तिस्मा भयौं (ख्रीष्टद्वारा)”।
ख्रीष्टले हामीलाई आफ्नो शरीरमा बसाल्नु मात्र हुँदैन, तर उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा भित्र डुबाउनु पनि हुन्छ। “किनकि चाहे हामी यहूदी हौं चाहे ग्रीक, चाहे हामी कमारा हौं चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौं; र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दिइयो।” (१ कोरिन्थी १२:१३)। हामीले पवित्र आत्मालाई प्राप्त गर्दा सबै आशिषहरूको भरपूरीमा सहभागी भएका छौं:
“तब हामी आफैले गरेका धर्मका कामहरूद्वारा होइन, तर उहाँकै कृपाअनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो — नयाँ जन्मको स्नान र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा; जसलाई (“जसलाई” शब्दले पवित्र आत्मालाई सङ्केत गर्दछ) उहाँले येशू ख्रीष्ट हाम्रा मुक्तिदाताद्वारा हामीमाथि प्रशस्त गरी खन्याउनुभयो” (तीतस ३:५-६)।
“…पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञालाई प्राप्त गरेर” (प्रेरित २:३३)।
“जसले ममाथि विश्वास गर्छ, पवित्रशास्त्रले भनेअनुसार, उसको हृदयबाट (एकदम भित्रबाट) जिउँदो पानीका नदीहरू बहनेछन्। तर यो कुरा उहाँले आत्माको विषयमा भन्नुभयो, जसलाई उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले पाउन लागेका थिए; किनकि पवित्र आत्मा अझैसम्म दिइनुभएको थिएन; किनभने येशू अझै महिमित हुनुभएको थिएन।” (यूहन्ना ७:३८-३९)।
परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहोस्, शान्तिदाता आउनुभएको छ! पिताको प्रतिज्ञा दिइएको छ! आत्माको बप्तिस्मा पेन्टेकोस्टको दिनमा सुरु भयो र मानिसहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गर्दा यस वर्तमान समयमा पनि निरन्तर भइरहेको छ।
यदि तपाईंले प्रभु येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ भने (यूहन्ना १:१२), के तपाईं ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग हुनुभएकोमा धन्यवादी हुनुहुन्छ (१ कोरिन्थी १२:२७)? मानिसहरूले “मण्डली जाने” कुरा गर्छन् तर के तपाईंले तपाईं आफैं नै मण्डली हुनुहुन्छ भनी महसुस गर्नुभएको छ? तपाईंले आफैंलाई ख्रीष्टको शरीरको अङ्गको रूपमा देख्नाले तपाईंको ख्रीष्टिय जीवनमा ठूलो भिन्नता ल्याउँदछ। परमेश्वरले अति महत्त्वपूर्ण तरिकाले तपाईंलाई तपाईंको शिर, प्रभु येशू ख्रीष्टसँग जोड्नुभएको छ (एफेसी ५:३०-३२), र परमेश्वरले तपाईंलाई अति महत्त्वपूर्ण तरिकाले यस शरीरमा भएका अन्य सबै विश्वासीसँग जोड्नुभएको छ। मण्डली कुनै संस्था होइन; यो एउटा जीवित संरचना हो, जोचाहिँ परमेश्वरकै जीवनद्वारा स्पन्दित भइरहेको छ (कलस्सी १:२७; गलाती २:२०)।
महत्त्वपूर्ण व्याकरणगत विचार
१ कोरिन्थी १२:१३ को व्याकरणगत संरचना सुसमाचारका पुस्तकहरू र प्रेरितको पुस्तकमा भएको आत्माको बप्तिस्मा सम्बन्धी पदहरूसँग एकसमान छ भनेर हामीले हेरिसक्यौं। यी हरेक पदहरूमा बप्तिस्मा दिनुहुनेचाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँले पवित्र आत्माभित्र (ग्रीक: en) (पवित्र आत्मासित वा पवित्र आत्माको माध्यमद्वारा) बप्तिस्मा दिनुहुन्छ।
बप्तिस्मा दिने कार्यमा ख्रीष्ट र पवित्र आत्मा दुवैजनाको भूमिका हुनु सम्भव छ। ख्रीष्टले पवित्र आत्मालाई नै सो कार्य गर्न दिनुभएर विश्वासीहरूलाई शरीरमा बप्तिस्मा दिनुभएको हुनसक्छ। यो कुरालाई यूहन्ना ४:१-२ मा चित्रण गरिएको छ। यूहन्ना ४:१ मा येशूले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्दा पनि बेसी चेलाहरूलाई बप्तिस्मा दिनुभयो भनी बताइएको छ। यूहन्ना ४:२ मा येशू आफैंले कसैलाई बप्तिस्मा दिनुभएन भनी खुलाइएको छ! कसरी उहाँले धेरैलाई बप्तिस्मा दिनुभएर एकैजनालाई पनि बप्तिस्मा नदिन सक्नुहुन्छ? जवाफ यो हो, येशूले धेरै चेलाहरूलाई बप्तिस्मा दिनुभयो तर उहाँले यो कार्य आफ्ना चेलाहरूद्वारा गर्नुभयो जोहरूले वास्तवमा बप्तिस्मा दिने कार्य गर्दथे। १ कोरिन्थी १२:१३ मा यस्तै हुनु सम्भव छ। बप्तिस्मा दिनुहुने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ (मत्ती ३:११; प्रेरित १:५ इत्यादिको प्रकाशमा) तर बप्तिस्मा दिने काम वास्तवमा पवित्र आत्माले गरिरहनुभएको छ। ख्रीष्टले आफ्नो बप्तिस्माको कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने माध्यमचाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। नयाँ नियमका पत्रहरूमा यो अवधारणा नौलो छैन। येशूले मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौं र तरपनि मुक्तिको वास्तविक कार्य परमेश्वरका आत्माद्वारा कार्यान्वयन गरिन्छ (१ कोरिन्थी ६:११ हेर्नुहोस्)।
ख्रीष्टले आफ्ना विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टको शरीरमा डुबाउनु हुन्छ भन्नु निश्चय पनि उचित कुरा हो, र त्यसैले उहाँसँग बप्तिस्मा दिनुहुने नामक पदवीको दाबी गर्ने उचित अधिकार छ। मत्ती १६:१८ मा आफ्नो मण्डली बनाउनुहुने ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भनी हामी सिक्दछौं। प्रेरित २:४७ मा मुक्ति पाएकाहरूलाई दिनहुँ मण्डलीमा थप्नुहुने प्रभु (येशू ख्रीष्) हुनुहुन्छ भनी सिक्दछौं। प्रेरित २:३३ लाई बिचार गर्नुहोस्, त्यहाँ आत्मालाई खन्याउनुहुने प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले पवित्र आत्माको आशिषपूर्ण व्यक्तित्वसँग सहकार्य गर्नुभइ, उहाँको अनुग्रहको महिमाको प्रशंसाको निम्ति यो महान् कार्य सम्पन्न गर्नुहुन्छ।
ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा गरिएको
विश्वासीहरूको महिमित ओहोदा छ। उनीहरू ख्रीष्टमा छन्। उनीहरू परमेश्वरका प्रिय पुत्रमा छन्: “यसैकारण कोही __________ छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बितिगएका छन्; हेर, सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्” (२ कोरिन्थी ५:१७)।
“यसकारण अब ख्रीष्ट येशू___ हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन” (रोमी ८:१)।
विश्वासीहरू कसरी यो ओहोदामा प्रवेश गर्छन्? कसरी मुक्ति पाएको व्यक्ति परमेश्वरको पुत्रमा राखिन्छ? यो आत्मिक बप्तिस्माको माध्यमबाट गरिन्छ (पानीको बप्तिस्माको माध्यमबाट होइन)। एउटा व्यक्तिले मुक्ति पाएकै घडी यो कार्य सम्पन्न हुन्छ। परमेश्वरले विश्वासीलाई आफ्नो पुत्रमा राख्नुहुने समय यही हो:
गलाती ३ अध्याय:
किकि ख्रीष्ट येशूमाथि राखिएको ____________द्वारा तिमीहरू सबै परमेश्वरका सन्तान हौ।
किनकि तिमीहरू जतिले ख्रीष्टभित्र _______________ (डुबाउनु, राखिनु) लिएका छौ, तिमीहरूले ख्रीष्टलाई पहिरेका छौ।
अब त्यहाँ न यहूदी रह्यो न ग्रीक, न कमारा न स्वतन्त्र, न पुरुष न स्त्री; किनकि ख्रीष्ट येशू____ तिमीहरू सबै एक हौ” (गलाती ३:२६-२८)।
रोमी ६ अध्याय:
वा हामीहरूमध्ये जतिजनाले _________ __________ ____________ (डुबाउनु, राखिनु) लियौं, हामीले उहाँकै मृत्युभित्र बप्तिस्मा लिएका थियौं भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाह छैन?
यसकारण हामी उहाँसँगै बप्तिस्माद्वारा मृत्युभित्र गाडियौं; र जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बौराइनुभयो, त्यसरी नै हामी पनि जीवनको नयाँपनामा हिँड्नुपर्दछ।
किनकि यदि हामी उहाँको मृत्युको समानतामा एकैसाथ जोरिएका छौं भने उहाँको बौरिउठाइको समानतामा पनि जोरिएका हुनेछौं (रोमी ६:३-५)।
विश्वास गरेको घडी साँचो बप्तिस्मामा के हुन्छ भनी देखाउन पानीको बप्तिस्माचाहिँ एउटा चित्रणयुक्त बप्तिस्मा हो। मुक्ति पाएको समयमा, एउटा मानिस येशू ख्रीष्टभित्र बप्तिस्मा गराइन्छ वा राखिन्छ, फलस्वरूप ऊ “ख्रीष्टभित्र” हुन्छ। यो साँचो बप्तिस्मालाई तल चित्राङ्कन गरिएको छ:
विश्वासी येशू ख्रीष्टभित्र बप्तिस्मा गराइएको छ (गलाती ३:२७; रोमी ६:३), यसको अर्थ यो पनि हो कि ऊ,
उहाँको मृत्युभित्र बप्तिस्मा गराइएको छ (रोमी ६:३)।
उहाँको गडाइभित्र बप्तिस्मा गराइएको छ (रोमी ६:४)।
उहाँको बौरिउठाइभित्र बप्तिस्मा गराइएको छ (रोमी ६:४-५)।
उहाँको शरीर, अर्थात् मण्डलीभित्र बप्तिस्मा गराइएको छ (१ कोरिन्थी १२:१३)।
अर्को शब्दमा, विश्वासीलाई पूर्ण रूपमा ख्रीष्टसित यतिसम्म सम्मिलित गराइएको छ कि प्रभु येशूले टार्ससका शाउललाई यसरी भन्न सक्नुभयो, “तिमी ________ किन सताउँछौ?” (प्रेरित ९:४)। शाउलले विश्वासीहरूलाई सताएका थिए भनी हामी जान्दछौं (१ कोरिन्थी १५:९)। त्यसोभए येशूले किन यसो भन्नुभयो, “तिमी मलाई किन सताउँछौ?” शरीरले दु:ख भोग्यो भने, शिरले महसुस गर्दछ!
तसर्थ, पानीको बप्तिस्मा विश्वासीको ख्रीष्टमा भएको यस महिमित सम्बन्ध र ओहोदाको चित्रण हुनुपर्छ। त्यसैले मैले (विश्वासीको रूपमा) यसो भन्न सक्छु:
आत्माको बप्तिस्माको व्यवहारिक महत्त्व
म उहाँको शरीरमा राखिएको छु। म अतिमहत्त्वपूर्वक मेरो शिर, प्रभु येशू ख्रीष्टसित जोडिएको छु (कलस्सी ३:३-४)। म अतिमहत्त्वपूर्वक ख्रीष्टमा मेरा दाजुभाइहरू र दिदि बहिनीहरूसित जोडिएको छु। म परमेश्वरकै जीवनद्वारा स्पन्दित भइरहेको एउटा जिउँदो संरचनाको हिस्सा भएको छु।
म ख्रीष्टमा सदाको निम्ति अनन्तसम्मै सुरक्षित छु। मेरो मुक्ति गुम्नको निम्ति, कसैले मलाई ख्रीष्ट शरीरबाट विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ (मलाई शरीरबाट छुट्टाउनुपर्ने हुन्छ!)। यो कहिल्यै पनि हुन सक्दैन।
मैले आत्माको बप्तिस्मा पाएको छु भन्ने तथ्यले ख्रीष्टिय एकतालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। त्यहाँ “एउटै शरीर”, “एउटै आत्मा” र “एउटै बप्तिस्मा” (एफेसी ४:४-६) छ। रगतद्वारा किनिएको हरेक विश्वासी ख्रीष्टको शरीरमा राखिएका छन्, र हामी एउटै मण्डलीको साझा अङ्ग हौं। हामीहरू एउटै शिरसँग जोडिएका छौं। हामीहरू एउटै रगतले किनिएका छौं। हामी एउटै आत्माद्वारा अन्तर्वास गरिएका छौं। हामीहरू एउटै स्वर्गीय पिताका सन्तानहरू हौं। हामी एउटै पुस्तकको (“एउटै विश्वास”) विद्यार्थीहरू हौं। हामीहरू एउटै जीवनका हकवालाहरू हौं। हामी एउटै धन्य आशाको बाटो हेरिरहेका छौं। आशिषपूर्ण एकता र अमूल्य अभिन्नता!
आत्माको बप्तिस्माले मलाई एउटा नयाँ र महिमित ओहोदामा प्रवेश गराउँछ।
आत्माको बप्तिस्माले मलाई ख्रीष्टसित उहाँको मृत्यु, गडाइ र बौरिउठाइमा सम्मिलित गराउँछ। ख्रीष्टले पूर्ण गर्नुभएको कार्य मेरो निम्ति अति व्यक्तिगत बन्दछ। उहाँको मृत्यु मेरो हुँदछ। उहाँक जीवन मेरो हुन्छ। म उहाँसित मरेँ र म उहाँसित जिउँछु र उहाँ मभित्र जिउनुहुन्छ (गलाती २:२०)
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 21:56:212020-04-28 14:24:32आत्माको बप्तिस्मा
पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ
पाठ ५—पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ
पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ सुन्दर र उत्साहपूर्ण सत्यता हो। यस महत्वपूर्ण सेवकाइलाई बुझ्न नयाँ नियमका धेरै खण्डहरूले हामीलाई सहायता गर्छ:
१ कोरिन्थी ६:१९-२० पढ्नुहोस् र यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्: पावलले विश्वासीको शरीरलाई ___________________________ भनी वर्णन गरे। के पावलले कोरिन्थीका विश्वासीहरूले यो सत्यता जानेको चाहे? __________ पवित्र आत्मा कहाँ हुनुहुन्छ (१९ पद)? __________ हामीले मुक्ति पाएको हुनाले, के हामी आफ्नै हौं? _________ हामी कसका हौं? ____________ के हामी आफ्नै निम्ति जिउन स्वतन्त्र छौं (२ कोरिन्थी ५:१५)? __________ हामी किन आफ्नै होइनौं (१ कोरिन्थी ६:२०)? ________________________________________ यो अतुलनीय मूल्य कसले तिरिदिनुभयो (१ पत्रुस १:१८-१९)? _______________ मुक्ति सित्तैंमा पाइन्छ, तर निश्चय पनि यो सस्तो छैन! एउटा बेठीक वाक्यमा गोलो लगाउनुहोस्:
पवित्र आत्मा परमेश्वर हरेक विश्वासीभित्र जिउनुहुन्छ र वास गर्नुहुन्छ।
हरेक विश्वासी मूल्य तिरेर किनिएकजो छ र ऊ पूर्ण रूपमा परमेश्वरको हो।
पवित्र आत्मा पाएको हरेक व्यक्ति पूर्ण रूपमा परमेश्वरको हो।
केही यस्ता विश्वासीहरू छन् जोहरू पूर्ण रूपमा परमेश्वरका हुन्, तर उनीहरूले अहिले सम्म पनि पवित्र आत्मा पाएका छैनन्।
रोमी ८:९ ले सिकाउँछ कि कुनै मानिससँग ख्रीष्टका _________ हुनुहुन्न भने ऊ ___________________________। यसको अर्थ हो यदि कुनै मानिससँग पवित्र ___________ हुनुहुन्न भने, ऊ परमेश्वरको होइन। त्यसैले, हरेक जो साँच्चै ख्रीष्टको हो, ऊभित्र ___________ ______________ वास गर्नुहुन्छ।
ठीक वा बेठीक:
_________ हरेक जो ख्रीष्टको हो, ऊसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ।
_________ हरेक साँचो विश्वासीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ।
_________ साँचो विश्वासीभित्र पवित्र आत्मा वास नगर्नुभएक हुन सम्भव छ।
_________ कुनै व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने, ऊ साँचो ख्रीष्टियन होइन।
एफेसी ३:११ मा साँचो मुक्ति पाएको हरेक व्यक्तिक जीवनमा घटेका तीन कुराहरूको बारेमा हामी सिक्न सक्छौं: “उहाँमा नै (१) तिमीहरूले __________को __________ अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको ___________ सुनेपछि भरोसा गर्यौ; उहाँमा नै (२) तिमीहरूले _____________ गरेपछि (३) प्रतिज्ञाको ___________ ___________ले तिमीहरू _________ मारियौ”। अब हामी मुक्तिका यी तीन तत्वहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं:
१.एउटा व्यक्तिले मुक्ति पाउनको निम्ति, उसले सुरुमा स______को व_______ सुन्नुपर्छ जुनचाहिँ उसको मु______को सु__________ (असल खबर) हो (एफेसी १:१३)। बिना विश्वास, के कुनै मानिसले मुक्ति पाउन सक्छ (एफेसी २:८)? __________ विश्वास भनेको परमेश्वरको वचनतर्फ उचित तवरले र सही तरिकाले प्रतिक्रिया दिनु हो। यदि तपाईंले कहिल्यै पनि परमेश्वरको वचन सुन्नुभएको छैन भने, के तपाईंले त्यसप्रति उचित तरिकाले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्? ___________ के प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा कहिल्यै पनि नसुनेको व्यक्तिले उहाँमाथि विश्वास गर्न सक्छ (रोमी १०:१४)? __________ “यसकारण विश्वास ________द्वारा आउँछ, र __________चाहिँ _____________ _________द्वारा।” (रोमी १०:१७)। त्यसैले, कसैले मुक्ति पाउनको निम्ति, उसले पहिले परमेश्वरको व_________ सु_______ पर्छ।
२.धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुन्छन्, तर, दु:खको कुरा, उनीहरूले कहिल्यै पनि मुक्ति पाउँदैनन्। मानिसले परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्र होइन, तर उसले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि वि_________ गरेर परमेश्वरको वचनलाई उचित प्रतिकृया पनि दिनुपर्छ (एफेसी १:१३; प्रेरित १६:३१)। पुरुष र स्त्रीहरू, केटा र केटीहरू सबैले एउटै तरिकाले मुक्ति पाउँछन् — उनीहरूले वि_________द्वारा मुक्ति पाउँछन् (एफेसी २:८) तर __________द्वारा होइन (एफेसी २:९)।
३.जब एउटा व्यक्तिले सुसमाचार सुन्छ र ख्रीष्टलाई र केवल उहाँलाई मात्र आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा भरोसा गर्दै प्रतिकृया दिन्छ, तब परमेश्वर उसमा एउटा अति सुन्दर कार्य गर्नुहुन्छ! ऊ प्रतिज्ञाको ____________ ____________ छा_____ मारिन्छ (एफेसी १:१३)। २ कोरिन्थी १:२१-२२ को अनुसार, हामीलाई छाप मार्नुहुने को हुनुहुन्छ? _____________ एफेसी १:१३ हामी कोद्वारा छाप मारिएका छौं? ______________________________________________ त्यसैले छाप मार्नुहुने व्यक्ति पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ (जसले हामीलाई छाप मार्नुभयो) र पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ त्यो छाप हुनुहुन्छ! छाप कहाँ लगाइएको छ (२ कोरिन्थी १:२२)? _____________________________ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पवित्र आत्माले छाप मार्नुभएको छ र यो छाप स्वामित्वको निशान हो!
मानौं कि गोठाला हर्कले उसको भेँडाहरूलाई यो छाप लगायो: (ह)
मानौं कि गोठाला कमलले उसको भेँडाहरूलाई यो छाप लगायो: (क)
तपाईं हिँड्दै जानुहुँदा छालामा (ह) चिन्ह लगाएको एउटा बेवारिसे भेँडा भेट्नुभयो। त्यो कसको भेँडा हो? ______________ तपाईं अझे पर जानुहुँदा तपाईंले अर्को भेँडा भेट्टाउनुहुन्छ। त्यसको शरीरमा ध्यानपूर्वक हेर्दा तपाईंले (क) निशान भेट्टाउनुभयो, त्यो पक्कै पनि कमलको भेँडा हुनुपर्छ। (क) निशान लगाइएको हरेक भेँडा ____________को हुनुपर्छ। यदि तपाईं (ह) निशान लगाइएको भेँडा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले गर्वसाथ भन्नसक्नुहुन्छ, “म जान्दछु म कमलको हुँ। उहाँले मलाई उहाँको व्यक्तिगत छापद्वारा ममा स्वामित्वको निशान लगाउनुभएको छ!”
ख्रीष्टमा भएको विश्वासीमा कसको “निशान” वा छाप लगाइएको छ (एफेसी १:१३)? ________________________________ विश्वासीलाई कसले छाप मार्नुभएको छ (२ कोरिन्थी १:२१-२२)? _____________ त्यसैले विश्वासीले भन्न सक्छ, “म ______________को हुँ भनी मलाई थाह छ किनभने उहाँले मलाई आफ्नो पवित्र ________________ छा_______ लगाउनुभएको छ।” २ तिमोथी २:१९ मा हामी यसरी पढ्छौं: “तरै पनि परमेश्वरको जग दृढतापूर्वक खडा रहन्छ, जसमा यो _________ लागेको छ: ‘_________ उहाँका ___________ चिन्नुहुन्छ’” जो साँच्चै उहाँका हुन्, उनीहरूलाई उहाँ चिन्नुहुन्छ! के उहाँका साँचो विश्वासीहरू को हुन् भनी उहाँ जान्नुहुन्छ? ___________ कसलाई उहाँले पवित्र आत्माद्वारा छाप लगाउनुभएको छ र कसलाई उहाँले छाप लगाउनुभएको छैन भनी के परमेश्वर जान्नुहुन्छ? __________ तपाईंले अन्य मानिसहरूलाई हेर्नुहुँदा र अवलोकन गर्नुहुँदा, कसभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनी साँच्चै देख्न के तपाईंको निम्ति सम्भव छ? ______ पवित्र आत्मा दृश्यमान हुनुहुन्छ कि अदृश्य हुनुहुन्छ? ____________ त्यसैले, परमेश्वरको छाप दृश्यमान छ कि अदृश्य? _________ तपाईंले मुक्ति पाउनुभएपछि पहिलो पटक जब तपाईंले ऐना हेर्नुभयो, के तपाईंले आफ्नो रूपमा केही खास परिवर्तन देख्नुभयो? ________ के तपाईंले पवित्र आत्मा आफूभित्र जिउनुभएको देख्नुभयो? ________ के तपाईंले प्रकाश १४:११ मा वर्णन गरिएका मानिसहरूमाझैं तपाईंको निधारमा परमेश्वरको नाम लेखिएको देख्नुभयो? ___________
ठीक वा बेठीक जवाफ दिनुहोस्:
__________ विश्वासी पवित्र आत्माद्वारा छाप मारिएको छ, तर परमेश्वरले बाहेक कसैले पनि उक्त छाप देख्न सक्दैन।
__________ पापीले मुक्ति पाएपछि उसको भौतिक शरीरमा ठूला परिवर्तनहरू आउँछन्।
__________ कुन मानिसहरूको हृदयहरूभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनी प्रभुले जान्नुहुन्छ (१ शमूएल १६:७ लाई २ कोरिन्थी १:२२ सित तुलना गर्नुहोस्।)
हामी उहाँका हौँ भनी परमेश्वरले साँच्चै जान्नुहुन्छ, तर हामी प्रभुका हौं भनी अन्य मानिसहरूले कसरी जान्न सक्छन्? यस प्रश्नको जवाफ २ तिमोथी २:१९ को पछिल्लो भागमा पाउन सकिन्छ, “ख्रीष्टको नाम लिने हरेक जन ____________ अलग रहोस्।” यस पद अनुसार, हामी साँचो विश्वासीहरू हौं भनी अन्य मानिसहरूले कसरी जान्न सक्छन्? _________________________________________________________________ केही मानिसहरूले हामीभित्र पवित्र आत्मा वास गर्नुभएको देख्न नसके तापनि, के उनीहरूले आत्माको फल देख्न सक्छन् (गलाती ५:२२-२३; एफेसी ५:९)? ___________ हामी ख्रीष्टका हौं भनी संसारले कसरी सक्छ (यूहन्ना १३:३५)? ______________________________________________
__________ संसारले वास्तवमै विश्वासीभित्र पवित्र आत्मालाई देख्न सक्छ।
__________ संसारले हाम्रो जिउने शैली र व्यवहारहरू देख्न सक्छ र उनीहरूले हाम्रो जीवनमा आत्माको कामहरूका प्रमाण देख्न सक्छ।
__________ साँच्चै पवित्र आत्मा पाएको व्यक्तिले अधर्महरूबाट अलग रहने इच्छा गर्दछ। उसले प्रभुलाई प्रसन्न बनाउन र उहाँको आज्ञा पालन गर्न रुचाउँछ।
__________ कुनै व्यक्ति निरन्तरै पाप र अपराधमा जिइरहेको छ भने ऊ प्रभुको होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ (१ यूहन्ना २:२९; ३:१० सित तुलना गर्नुहोस्)।
__________ कुनै मानिसले आफू ख्रीष्टियन भएको दाबी गर्दछ भने ऊ साँचो विश्वासी हुनैपर्छ। यदि तपाईंले आफूले मुक्ति पाएको छु भनी भन्नुहुन्छ भने तपाईंले साँच्चै मुक्ति पाएको हुनुपर्छ।
एफेसी १:१४ ले हामीलाई सिकाउँछ, कि पवित्र आत्माचाहिँ “किनिएको सम्पत्तिको ______________ समयसम्म हाम्रो पैतृक-सम्पत्तिको __________ (अग्रिम भुक्तानी, धरौटी) हुनुहुन्छ।” यस पदले विश्वासीको अन्तिम छुटकाराको कुरा गरिरहेको छ जुनबेला ऊ सदा-सर्वदाको निम्ति प्रभुसित हुनेछ र उसले फेरी कहिल्यै पाप गर्नेछैन। येशूले हामीलाई कुनै एकदिन उहाँ आफ्ना जनका निम्ति फर्केर आउनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ (हेर्नुहोस् यूहन्ना १४:२-३; रोमी ८:२३)। ख्रीष्टको प्रतिज्ञा सत्य छ भन्ने ग्यारन्टीको निम्ति, पिता परमेश्वरले बैना वा धरौटी स्वरूप हामीलाई आफ्नो पवित्र आत्मा दिनुभएको छ र एकदिन हाम्रो मुक्ति पूर्ण हुनेछ (फिलिप्पी १:६ सित तुलना गर्नुहोस्)। “जसले हामीमा ______ पनि लगाउनुभएको छ, र ___________को _______ (धरौटी) हाम्रा हृदयहरूमा दिनुभएको छ” (२ कोरिन्थी १:२२)। “अब जसले हामीलाई यही कुराका निम्ति _________ पार्नुभयो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ; उहाँले हामीलाई _______‌___को ________ (धरौटी) पनि दिनुभएको छ” (२ कोरिन्थी ५:५)। “बैना” शब्द बुझ्नलाई मगनी औंठीको विचार गर्नुहोस्। जब एउटा जवान मानिसले आफ्नो प्रियालाई मगनीको औंठी दिँदछ, उक्त औंठीले कुनै एकदिन ऊ त्यस औंठी लगाएकी स्त्रीलाई विवाह गर्न आउनेछ भनी एउटा बैना वा ग्यारन्टीको रूपमा काम गर्दछ। उसले आफ्न दुलहीलाई ग्रहण गर्नेछ र उसितको सुन्दर वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसैले, हामीसँग प_______ आ_______ हुनुभएको तथ्य नै ख्रीष्ट कुनैदिन आफ्नो दुलहीलाई लिनलाई आउनुहुनेछ भन्ने कुराको ग्यारन्टी हो (यूहन्ना १४:१-३)। हामी उहाँसँग आमने सामने हुँदा (१ थेस्सलोनिकी ४:१६-१८) त्यसदिन वर्तमान समयमा भएको हाम्रो आनन्दमय सम्बन्ध भन्दा पनि अझै नजिकको र निकै महान् सम्बन्ध हुनेछ (फिलिप्पी १:२१-२३; २ कोरिन्थी ५:८; १ यूहन्ना ३:१-३)।
ठीक कि बेठीक:
__________ पवित्र आत्मा अहिले हामीसँग हुनुभएको तथ्यले एकदिन हाम्रो मुक्ति पूर्ण हुनेछ र हामी प्रभुसँग रहनेछौं भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। छाप लगाइएका सबैजना सदाका निम्ति मुक्त गराइनेछन्!
__________ हामीले पाप नगरून्जेल सम्मको निम्ति हामी पवित्र आत्माले छाप मारिएका छौं (एफेसी ४:३०)।
__________ विश्वासीको जीवनमा भएको पापको कारणले उसले पवित्र आत्मा शोकित र दु:खित तुल्याउन सम्भव छ (एफेसी ४:३०)।
__________ जब विश्वासीले पाप गर्दछ, पवित्र आत्माले उसलाई छोडिदिनुहुन्छ र उसलाई त्याग्नुहुन्छ (एफेसी ४:३०; यूहन्ना १४:१६-१७)।
__________ उहाँ हामीभित्र रहनुभएको होस् र सदाको निम्ति हामीसँग जिउनुभएको होस् भनेर पिता परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ (यूहन्ना १४:१६)।
__________ मुक्ति पाएको मानिसले पवित्र आत्मालाई गुमाउन सक्छ र उसको छाप मेटिनसक्छ।
__________ पवित्र आत्माले कहिलेकसो विश्वासीलाई छोड्नुहुन्छ (यूहन्ना १४:१६; हिब्रू १३:५)।
__________ साँचो विश्वासीको छाप मेटिनु सम्भव छ।
__________ कुनै मानिसले आफू ख्रीष्टियन भएको दाबी गर्दछ भने, उसले यो बुझ्नुपर्छ कि उसले साँच्चै मुक्ति पाएको छ र साँच्चै उसको जीवन शैलिद्वारा ऊ छाप मारिएको छ (२ तिमोथी २:१९)।
खाममा छाप लगाइएको हुन्छ। छापको उद्देश्य उक्त खाममा भएका कुराहरू गन्तव्य स्थानमा कुशलतापूर्वक पुगोस् भन्ने हेतुले सुरक्षित राख्नु र बाहिर खस्नबाट जोगानु हो।
परमेश्वरले आफ्ना हरेक सन्तानहरूमा गन्तव्य स्थानको छाप लगाइसक्नुभएको छ, यस्तो स्थान जुनचाहिँ “_____________ सुरक्षित राखिएको छ” (१ पत्रुस १:४)। परमेश्वरले हरेक विश्वासी उसको अन्तिम गन्तव्य स्थानमा सुरक्षित पुगेको निश्चित गर्नुहुनेछ। हामी त्यहाँ पुग्नेछौं भन्ने कुराको पवित्र आत्मा “छाप” वा ग्यारन्टी हुनुहुन्छ।
एउटा सामान्य किसिमको खाम लिनुहोस्। एउटा कागजको टुक्रामा आफ्नो तस्वीर बनाउनुहोस्। तपाईं ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनी हामी मानिलिन्छौं। तपाईंले त्यस तस्वीरमा आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो कागजलाई पट्याउनुहोस् र खामभित्र राख्नुहोस्। खामको मुखलाई टाँसेर बन्द गर्नुहोस् र यसमा सुरक्षित साथ छाप लगाउनुहोस्। खामको पछाडि यस्तो लेख्नुहोस्:
“म ख्रीष्टको किनिएको सम्पत्ति हुँ।
पवित्र आत्मा छाप हुनुहुन्छ
र उहाँको कारणले म सुरक्षित छु।”
खामको अगाडि गन्तव्य स्थान लेख्नुहोस्:
पिताको घरमा (यूहन्ना १४:१-३)
तेस्रो स्वर्गमा अवस्थित
पठाउने व्यक्तिको विवरणमा लेख्नुहोस्:
मालिक, उद्धारकर्ताको तर्फबाट
प्रभु येशू ख्रीष्ट,
जसले मलाई किन्नुभयो
स्ट्याम्प लगाउने ठाउँमा:
पूरा मूल्य चुक्ता
व्याभारिक दृष्टान्तले यस पाठको केही सत्यताहरूलाई राम्ररी सिकाउनेछ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 21:53:042020-04-28 14:24:32पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ
© 2021 Word of Truth